कर्ण शाक्य- खोज-New Book of Karna shakya Khoj after Soch ~ Khabardari.com
कर्ण शाक्य- खोज-New Book of Karna shakya Khoj after Soch
2:01 AM admin 1 comment
Popular writer, entrepreneur, social worker, Philanthropist Karna Shakya has introduce his new book Khooj after the grand success and popularity from his writing from the book Sooch. Every nepalese must read book 'khoj' was publish on the popular nepali blog mysansar.com.
Listen the audio of the first part of the book or enjoy reading below
कहिलेकाहीँ कतिपय पाठकले मलाई ‘दानवीर कर्ण’ पनि भन्ठान्दा रहेछन्। हो, मलाई कसैसित लिनभन्दा कसैलाई दिन मन लाग्छ। तर दिन पनि कतिसम्म दिने? घरमा कहिलेकाहीँ रोगीहरू आउँछन्, अनेक बिरामीहरू आउँछन्, सामाजिक कार्यकर्ताहरू चन्दा लिन आउँछन्। आउने जति सबैलाई अलिअलि मात्र दियो भने पनि हजारौँहजार पुग्छ। त्यत्रो धनसम्पत्ति दिन सक्ने धनाढ्य पनि त होइन नि म! थुप्रै पाठक मलाई एउटा दाता भन्ठानेर अनेक सहयोगको अपेक्षा गर्न घरमा आउँछन्। कोही जागिर खान, कोही आफ्नो रोगको उपचारगर्नका लागि मकहाँ आर्थिक सहयोग लिन आउँछन्। नाइँ भन्न गाह्रो हुन्छ, तर सबैलाई दिन पनि सकिन्नँ।
युवा पाठकहरूले आफ्नो कल्पनाको संसारमा मलाई एउटा आदर्श पुरुष (रोल मोडल) का रूपमा राख्न लाग्ोको अनुभव भयो। यो उचाइ मेरा लागि धेरै माथिको जस्तो लागेको छ र त्यहाँ बस्ने आँट मैले गर्न सकिरहेको छैन। यस स्थितिले गर्दा आफूले आफैँसँग डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गयो। सच्चाइको जिन्दगीभन्दा ठूलो आकार Larger than life मा बाँच्न गाह्रो हुँदो रहेछ। म जो हुँ, त्यसैमा बाँच्न सजिलो छ।
अन्तिम भाग - श्रद्दा र बिश्वास Click to read श्रद्दा र बिश्वास
अरूहरूका निमित्त बाँच्नु सजिलो छैन। क्यान्सरबाट मेरी पहिली श्रीमती र छोरीको देहावसान भएपछि म आठ–दस वर्षसम्म यो क्षेत्रमा अन्तरात्माबाटै लागेको थिएँ। क्यान्सर रोगी र उनीहरूका आफन्तसित पीडा र दुःख कम गर्न जानी–नजानी मैले काउन्सिलिङको काम गरेको थिएँ। पछि यसले मेरो दिमागमा एउटा प्रतिकूल असर पार्न थाल्यो। अकस्मात राति दुई बजे निद्राबाट झसङ्ग बिउँझिने, मनमा अनायास डर लाग्ने, अनि एकैछिनमा चिटचिट पसिना आउने हुन थाल्यो। काठमाडौँमा यो मानसिक समस्याबारे मैले कुनै साइक्याट्रिक डाक्टरहरूसित छलफल गर्दा अर्कै हल्ला हुन्छ भनेर अमेरिकाको हवाइ जाँदा मानसिक रोगका एकजना डाक्टरसित जाँच गराएँ।
सबै कुरा सुनेपछि डाक्टरले बीचैमा ‘आइन्दा अब कुनै पनि बिरामी र बिरामीका परिवारहरूलाई सरसल्लाह दिने काउन्सिलिङको काम नगर्नू’ भनी सल्लाह दिए। वास्तवमा कसैको दुःख र पीडाबारे कुरा गर्ने पनि एउटा प्रक्रिया र प्रविधि हुँदो रहेछ। बिना ज्ञान कसैको दुःख साट्न लाग्यो भने यसले दूरगामी असर पार्दो रहेछ। वास्तवमा के भएको रहेछ भने जब म कुनै बिरामी र उसका परिवारलाई ढाडस दिन खोज्छु, त्यो बेला उनीहरूको दुःखद पीडाका अंश मेरो दिमागका कोशकोशमा गएर सुटुक्क बस्दा रहेछन्। पछि जब पीडाका धेरै कथाहरू दिमागमा थुप्रिन्छन्, अनि त्यसलाई धान्न नसकेर कहिलेकाहीँ मध्यरातमा त्यो पीडाले तर्साउँदो रहेछ।
कैयौँचोटि मेरा परिवारका सदस्यहरूले मलाई भनेका छन्, ‘अब भयो, जेजति गर्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्नुभयो। अब तपाईले जिन्दगीको अर्को धार सुरु गर्नुपर्‍यो।’ दोस्रो विवाह गरेपछि क्यान्सरसम्बन्धी समाजसेवाबाट संन्यास लिने विचार मैले पनि गरेको थिएँ। किनभने जुन बेला म क्यान्सरको कुरो गर्छु, त्यो बेला मेरो मनभित्र बितेका भावनात्मक एवम् मार्मिक लहरहरूमा म बग्ने गर्छु। त्यसरी अतीतका सम्झनाहरूमा हराउँदा सायद मेरी दोस्री श्रीमतीको मनमा अवश्य पनि असजिलोपन र अप्ठ्यारोपन अनुभव भएको हुन सक्छ। किनभने कुनै पनि श्रीमतीलाई आङ्खना श्रीमान्को अरूसितको सम्बन्ध स्वीकार्न सजिलो हुँदैन, चाहे त्यो अर्की आइमाई मेरै पहिलेकी श्रीमती नै किन नहोऊन्।
मनमा यस्ता खालका संवेदनशील व्यावहारिक कुराहरू आए पनि मैले क्यान्सरसम्बन्धी समाजसेवाको क्षेत्रलाई छोड्नै सकिनँ र यस क्षेत्रमा लागेका मेरा अन्य मित्रहरूले पनि मलाई छोड्न दिएनन्। खास गरी मेरा अत्यन्त प्रिय मित्र दिवाकर राजकर्णिकार, जो अहिले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ मलाई क्यान्सरसम्बन्धी हरेक कार्यक्रमहरूमा सहभागी बनाइरहनुहुन्छ। यस क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको हुँदा यस रोगबारे ममा धेरै जानकारी पनि भइसकेको छ। डाक्टरले जस्तै यो रोगको प्रतिकारात्मक एवम् उपचारात्मक पक्षसमेत मैले विस्तृत रूपले जान्ने मौका पाएको छु।
तीन वर्षपहिले बैङ्ककको बुम्रुङग्राड अस्पतालबाट मेरो प्रोस्टेटमा क्यान्सर नभएको रिपोर्ट दिइएको थियो। छ महिनापछि रगत जचाउँदा PSA मा फेरि बढोत्तरी भएको देखियो। त्यसपछि मैले क्यान्सरबारे अरू थप जानकारी लिन खोजेँ। लोग्नेमान्छेको रगतमा PSA बढी देखियो भने यसले ट्युमरको सङ्केत गर्छ। मलाई थाहा छ, साठी वर्ष नाघेपछि थुप्रै मानिसलाई प्रोस्टेटमा पिसाबसम्बन्धी अनेक रोगहरू हुन सक्छन्। साधारणतया रगतमा PSA बढी हुनासाथ क्यान्सरको शङ्का गरिन्छ। तर कतिपय साथीहरू PSA बढी हुँदाहुँदै पनि केही नगरीकन डरले होला सायद त्यसै बसिरहन्छन्। यसरी बस्न हुन्छ भनेर त भन्न सकिन्न, तर भन्छन् मानिस प्रोस्टेटको क्यान्सरले मर्दैन रे ! किनभने यो कति ढीलो बढ्छ रे भने भविष्यमा उसलाई प्रोस्टेटको क्यान्सरले सताउनुभन्दा पहिले नै बुढेसकालका अन्य रोगहरूले उसलाई सताउँछन् रे !
तर क्यान्सरसम्बन्धी ज्ञान र चेतनाले मलाई त्यसै चुपचाप बस्न दिएन। मैले आफ्नो रोगबारे विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय डाक्टरहरूसित सरसल्लाह लिने काम गरिरहेँ। यसै क्रममा दुई वर्षपहिले म फेरि बैङ्ककको बुम्रुङग्राड अस्पतालमै पुगेँ र मेरो पहिलेकै डाक्टरलाई जचाएँ, बोन स्क्यानिङ गराएँ, केही देखिएन। पेटको अल्ट्रासाउन्ड गराएँ, केही भेटिएन। मुत्रद्वारमा
डाक्टरले औँला घुसारेर जाँच गरे, त्यहाँ पनि कुनै असाधारण सङ्केत देखिएन। तर PSA भने घट्तै घटेन। प्रोस्टेटसम्बन्धी बेल्जियमका विश्वविख्यात डाक्टर आइन मार्गरेटले त भने पनि, ‘अब केही धन्दा मान्नुपर्दैन, रक्तपरीक्षण गर्ने काम छोडिदेऊ, आरामले बस, मासु धेरै नखाऊ, एक्सरसाइज गर र क्यान्सरको चिन्ता छोड।’
मलाई पनि लाग्यो, अब त्यसरी नै जिन्दगी बिताउनुपर्ला ! तर कहाँ हुन्छ ! एकचोटि क्यान्सरको शङ्का लागेपछि त्यसका बारेमा निर्क्योल त गर्नैपर्‍यो ! शङ्कैशङ्कामा जिन्दगी आरामले बाँच्न सकिँदैन। एकचोटि सत्य थाहा पाएपछि जे हुन्छ, देखा जाएगा। जिन्दगी बिताउन धेरै गाह्रो त हुँदैन ! बैङ्ककका डाक्टरले फेरि प्रोस्टेटको बायोप्सी गर्ने सल्लाह दिए। बायोप्सी गर्न खोजेको थिएँ, तर पहिलेजस्तै इन्फेक्सन हुन्छ होला भन्ठानेर मैले बैङ्ककमा बायोप्सी गर्न मानिनँ र काठमाडौँमा फर्केर दिल्लीमा गई एउटा राम्रो डाक्टरकहाँ बायोप्सी गराउने विचार गरेँ। मेरा जेठा छोरा सुनील मसँग रिसाए, ‘यस्तो राम्रो अस्पताल छोडेर अब कहाँ नेपाल र इन्डियामा बायोप्सी गर्ने ! यहाँसम्म आइसकेपछि यहीँ गर्ने नि ! अब कहाँ फर्कने !’
छोराले जबर्जस्ती गरे पनि मैले मानिनँ र नेपालमै फर्किएँ। काठमाडौँ आएपछि मेरी श्रीमतीले अमेरिकामा आङ्खना माइती भएका हुँदा त्यहीँ गएर उपचार गर्ने कुरा गरिन्। त्यो पनि मैले मानिनँ। नमान्नुको पनि कारण छ। त्यो के भने अमेरिकामा मेरो एउटा मित्र छ डा. स्टिभ स्टिभेन्स। ऊ युनिभर्सिटी अफ म्यासाच्युसेट, युम्यासको समाजशास्त्रको प्राध्यापक हो। उसलाई पनि प्रोस्टेटको क्यान्सर भएको थियो। सात वर्षपहिले बोस्टन सहरको एउटा उच्चस्तरीय अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेको थियो। शल्यक्रियापश्चात घाउ नै राम्ररी निको नभईकन तीन दिनमै पेटमा पाइप र पिसाब सङ्कलन गर्ने प्लास्टिक ब्यागसमेत झुन्ड्याई उसलाई डिस्चार्ज गरेर घर पठाइएको थियो। अपरेसनको टाँका नकाटेसम्म उसले अस्पतालमै बसेर उपचार गर्न खोजेको थियो। तर ‘इन्सुरेन्स पोलिसी याने’ बीमासम्बन्धी नियमले नदिएपछि घरैमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता भयो। घर गएको तीन दिनपछि नै पाइप्ाबाट आउनुपर्ने पिसाब बन्द भएछ। उसलाई परेको पीरमर्का मलाई सुनाउँदा यस्ता समस्याहरू नेपालमा मात्र होइन, अमेरिकामा पनि हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा थाहा पाइयो। विदेशीहरू त बच्चैदेखि स्वतन्त्र जीवनशैली बिताउने भएका हुँदा यस्ता समस्याहरूलाई उनीहरू सहजै लिन्छन्, तर टाउको मात्र दुख्यो भने पनि
परिवारको सहानुभूति चाहिने हामी नेपालीहरूका लागि त्यो त्यति सजिलो हँुदैन। जब अमेरिकामा स्टिभजस्ता विशिष्ट स्थानीय बासिन्दालाई त त्यस्तो आपत पर्न सक्छ भने हामीलाई त्यहाँ कस्तो हालत हुन्छ होला?
पैसा बढी खर्च हुन्छ भनेर अमेरिकामा उपचार गर्न नचाहेको होइन। कहिलेेकाहीँ हामीलाई अपर्झट आपतविपत् आइपर्दा हतारिएर हामी त्यस्तो निर्णय गर्छाैं जसका कारण हामीले पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ। क्यान्सर रोग लाग्यो भने यस रोगलाई एकचोटि मात्र उपचार गरेर पुग्दैन। एकचोटि मात्र उपचार गरिने भए त जहाँ पनि गइन्थ्यो होला। तर समय–समयमा स्वास्थ्य–परीक्षणका लागि विदेशमा धाइरहनुपर्छ। कतिचोटि जाने? भिसा चाहियो, डलर साट्नुपर्‍यो, परिवार र आङ्खना सबै उद्योग–व्यापारलाई छाडेर महिनौँँ–महिनासम्म बाहिर बस्नुपर्‍यो। स्वास्थ्य–उपचारका निमित्त विदेश जाँदा सम्पूर्ण परिवारका सदस्यको र आºनो पनि मन स्थिर हुँदैन। बिरामी शरीर बोकेर विदेश जाँदा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तनाव खप्नु सजिलो कुरो होइन। विदेशमा बसी उपचार गराउँदा बिरामीलाई घरको सम्झनाले सताउँछ र सम्प्ाूर्ण परिवारलाई पनि विदेशमा बिरामीलाई के भइरहेछ भन्ने डर–त्रासले सताउँछ। त्यसैले मैले या त नेपालमा या भारतमा स्वास्थ्य–उपचार गर्ने निर्णय गरेँ। अन्तमा मैले दिल्लीको राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा बायोप्सी गर्ने विचार गरेँ। कथम्कदाचित् क्यान्सर भएको थाहा पाइयो भने पनि त्यहीँ शल्यक्रिया गरेर उपचार गर्ने मनसाय बनाएँ।
दिल्ली जान टाढा पनि छैन। हवाइजहाजको टिकट पाइएन भने रेलबाट पनि जान सकिन्छ। भारतको कुनै पनि सहरमा उपचार गर्न जाँदा एक्लै पनि जान सकिन्छ र केही पैसाको व्यवस्था गर्न सकियो भने सम्पूर्ण परिवारलाई समेत लिएर जान सकिन्छ। योभन्दा आरामदायी उपचार के हुन सक्छ?
म सबै परिवार र काम गर्ने मानिसहरूलाई समेत लिएर दिल्लीमा उपचार गर्न गएँ। दिल्लीको रोहनीस्थित राजीव गान्धी अस्पतालका डाक्टर सुधीर रावलसित अनुमति ९ब्उउयष्लत्कभलत० लिएर भेट्न गएँ। चालीस–पैँतालीस वर्षका, अग्ला, हेर्दैमा डाक्टर भन्न लायकका व्यक्ति रहेछन् उनी। कुरा गर्ने धेरै कम, तर रोगका बारेमा उनको ज्ञान धेरै राम्रो रहेछ। पन्ध्र–बीस मिनेट कुरा गरेपछि मेरो मनमा लाग्यो यही डाक्टरसित म बायोप्सी गराउँछु र क्यान्सर रहेछ भने पनि यही डाक्टरको हातबाट शल्यक्रिया गराउँछु।
रोगको उपचारका निमित्त डाक्टरलाई विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। आशा र विश्वासविना रोगको उपचार गर्न सकिँदैन।
बैङ्ककमा बायोप्सी गराउँदा अति नै नराम्रो किसिमले इन्फेक्सन भएको हुँदा राम्ररी विचार गरिदिनका निमित्त मैले डाक्टर रावललाई अनुरोध गरेँ। डाक्टर रावलले बायोप्सी गर्नुभन्दा एक दिनअगाडि नै अस्पतालमा भर्ना गराएर सुरुदेखि नै एन्टिबायोटिक इन्जेक्सन दिएपछि मात्र बायोप्सी गर्ने विचार गरे ताकि इन्फेक्सन हुने सम्भावना एकदमै कम रहोस्। डाक्टर रावलकै उपस्थितिमा अन्य दुईजना डाक्टरले मेरो प्रोस्टेटमा इन्जेक्सनको ट्युब घुसारे र दस–पन्ध्र ठाउँबाट सूक्ष्म तरिकाले बायोप्सीका लागि मासुहरू निकाली जाँच गर्न पठाए। बायोप्सीको नतिजा ४८ घन्टापछि आउँदो रहेछ। बायोप्सीपश्चात् म अस्पताल छाडेर पनि जान सक्थेँ। तर मैले रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म अस्पतालमै बस्नका लागि डाक्टरसँग अनुरोध गरेँ। यस्तो अवस्था के अमेरिकामा सम्भव थियो? भइहालेको भए पनि के अलिअलि पैसाले त्यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्थ्यो?
दुई दिनपछि डा. रावलले अस्पतालको मेरो कोठैमा आएर बायोप्सीको रिपोर्ट दिए। त्यो बेला म एक्लै खाटमा सुतिरहेको थिएँ। जब मैले बायोप्सीको रिपोर्ट हेरेँ, मेरा आँखा सबैभन्दा पहिले ‘कार्सिनोमा’ भन्ने शब्दमा गइहाले। यसको मतलब हो मेरो प्रोस्टेटको कुनै कुनामा क्यान्सर सुटुक्क लुकेर बसिरहेको रहेछ। रिपोर्ट हेर्दाहेर्दै मलाई भगवान्सित साह्रै रिस उठ्यो। यही रोगले बीस वर्षपहिले मेरी श्रीमतीलाई लग्यो, मेरी जवान छोरीलाई लग्यो। विगत बीस वर्षदेखि म यही क्षेत्रमा मन, वचन र कर्मले सेवा गर्दै आएँ र एउटा मान्छेले जेजति गर्न सक्छ, यस क्षेत्रमा मैले काम गरेँ। आखिर मलाई नै किन फेरि यो रोग लागेको? वास्तवमा त्यो बेला मेरो मन शून्य थियो, कुनै खास डर त थिएन तर खालि भगवान्सँग रिस उठिरहेको थियो।
त्यही बेला छोरा सुनील अस्पतालको कोठामा टुप्लुक्क आइपुगे। सायद उनको मनमा एउटा अन्योलपूर्ण त्रासदीको आँधी उठिरहेको थियो। अनुमतिविना नै ‘यो के हो?’ भन्दै उनले मेरो हातबाट बायोप्सीको रिपोर्ट झ्वाट्ट लिएर हेरे। मैले छोरालाई केही भनिनँ। केही भन्ने शब्द पनि आएन। छोरो आत्तिएला भन्ठानेर मैले जबर्जस्ती मुखमा कृत्रिम मुस्कान ल्याउन खोजेँ। तर त्यो बेला मैले आºनो चेहरामा कुनै परिवर्तन ल्याउन सकिनँ। उनको मनभित्रको बेचैनी मैले अनुभूत गरेँ। रिपोर्टमा जब उनले ‘क्यान्सर’ शब्द लेखेको देखे, उनी केही बोल्न सकेनन्। एकटक रिपोर्टलाई तलमाथि हेर्दै गए। म पनि उनीसँग केही बोलिनँ। साँच्चै भन्ने हो भने त्यस क्षणमा मैले आºनोभन्दा पनि आफ्नो छोराको विषम मानसिक स्थितिलाई सम्भि्करहेको थिएँ। छड्के आँखाले बीच–बीचमा म सुनीललाई हेर्दै थिएँ। उनको आँखा रसाइसकेको थियो। तर उनी आँसु झर्नबाट रोक्न कोसिस गरिरहेका थिए। के बोल्ने, के नबोल्ने ! उनले केही ठम्याउन सकेनन्। अन्तमा मनभित्रको पीडालाई रोक्नै नसकी ‘हत्तेरी ! यो के भएको?’ भन्ने शब्दहरू उनको मुखबाट अनायास निस्किहाले। जब उनका आँखाभित्र रोकिएर टलपल भइरहेको आँसु टपक्क खसेर लगाइरहेको चस्माको सिसामा पर्‍यो, अनि उनी कुनै शब्द नबोली खुरुक्क अस्पतालको कोठाबाट बाहिर निस्किए।
छोराको आँखाबाट झरेको आँसुको एउटा थोपोले मेरो मनमा ठूलो हलचल ल्यायो। एकैचोटि मेरो शून्य दिमागमा एउटा परिवर्तन आयो। मैले पितृत्वको भावनाको स्पन्दन र स्पर्श अनुभव गरेँ। क्षणभरमै मेरो मनलाई एउटा अत्यन्त मार्मिक चिन्तनले झक्झक्यायो र लाग्यो अब मैले मेरो परिवारका निमित्त बलियो हुनुपर्छ। त्यसपछि भगवान्प्रतिको रिस तुरुन्तै हरायो र मनभित्रको अन्तरकुन्तरमा रहेका डर–त्रासयुक्त विचारहरू पनि न्यून भएर गए। मैले आफ्नो सम्पूर्ण मनमस्तिष्क एउटै कुरामा केन्द्रित गरेँ। कसरी बलियो हुने? अब के हुन्छ होला? कति बाँच्ने हुँ? जस्ता कुनै पनि कुरामा ध्यान गएन र डर पटक्कै लागेन। बरू एउटै कुरा सोचेँ, ‘अब मैले कसरी आफूलाई सम्हाल्ने? कसरी आफूलाई बलियो पार्ने? ताकि मेरो परिवारले चिन्ता नलेओस्।’ सुनील अस्पतालको बाहिर कुनै कुनामा बसेर आँसु झारिरहेका थिए होलान् वा आङ्खना साथीहरू र डाक्टरहरूसित मेराबारे कुरा गरिरहेका थिए होलान्, तर मचाहिँ एक्लै खाटमा बसेर आफूले आफैँलाई सम्हाल्ने र आफूले आफैँलाई बलियो पार्ने तरिकाहरू खोज्न थालेँ।
आँखा चिम्लेर सबैभन्दा पहिले मैले सोचेँ, ‘मेरा बुबाको ५७ वर्षमा देहावसान भएको थियो। म अब ६३ वर्ष पुगेँ। बुबाभन्दा बढी त ५ वर्ष बाँचेको छु म।’ यसरी आफूलाई बलियो पार्न खोजेँ। मैले फेरि सोचेँ, ‘आम नेपाली जनताको ५०–५५ वर्षमा देहावसान हुन्छ। मैले १३ वर्षको जिन्दगी बोनसका रूपमा बाँचेको छु, किन पछुताउने?’ फेरि आफूले आफैँलाई ढाडस दिएँ। आफूलाई बलियो बनाउने प्रयासमा मैले विचार गरेँ, ‘मेरा सबै परिवारको सामाजिक र आर्थिक स्थिति राम्रै छ, खान–लाउन पुग्छ, परिवारका कुनै पनि सदस्य बदमास छैनन्, बेइमान छैनन्, दुर्व्यसनी छैनन्, रक्सी पिउँदैनन्, रन्डीबाजी गर्दैनन्, कसैको उधारो खाँदैनन्, आफ्नो पारिवारिक व्यवसाय सफलतापूर्वक चलाइरहेका छन्, र आफ्नो कर्तव्य–कर्म पालना गरी जिन्दगीलाई सुचारु रूपले चलाइरहेका छन्। देशको अवस्था राम्रो भयो भने अरू सात पुस्तासम्म उनीहरूलाई खान–लाउन पुग्छ। कान्छी छोरी पनि १७ वर्ष नाघिसकी। ऊ पढाइमा चुस्त छे र उसको भविष्य पनि राम्रै हुन्छ भन्ने कुरामा म निर्धक्क छु। यसमा पनि मैले केही चिन्ता लिनुपर्ने आवश्यकता छैन।’ त्यसपछि, एउटा जिम्मेवार नागरिकका हैसियतले मैले गर्न बाँकी के छ? त्यो कुरा म सोच्न थालेँ। आफूले आफैँलाई बलियो पार्न आफ्नो आत्मबल बलियो पार्नुपर्ने रहेछ। आत्मबललाई बलियो पार्न स्वाभिमान हुनुपर्दाे रहेछ र स्वाभिमानी बन्न हामीले आफूलाई गौरवान्वित हुने काम पनि गर्नुपर्दा रहेछ।
मैले गर्व गर्नुपर्ने कुरा के छ भनी म खोतल्न थालेँ। पहिले मैले आफ्नो होटलका बारेमा सोचेँ। तीन–चारवटा होटल छन्, अलिअलि धनसम्पत्ति कमाइएको छ। तर मैले त्यो धनसम्पत्तिको आडमा आफूलाई गौरवान्वित बनाउन सकिनँ। पैसा त सबैले कमाउँछन्, स्म्ाग्लिङ गरेर कमाउँछन्, ठगेर कमाउँछन्, कुकर्म गरेर पनि कमाउँछन्। धनसम्पत्तिले मात्र के गर्छ? के गर्ने त्यो धनसम्पत्तिले? जिन्दगीको मूलधन पैसा मात्र होइन रहेछ। मरेपछि त त्यसलाई पनि छाडेर जानुपर्दाे रहेछ। त्यस बेला कुनै पनि धनसम्पत्ति र वैभवको माया, मोह र लालसा आएन। त्यति मात्र होइन, यो धनसम्पत्तिले मलाई गौरवान्वित र स्वाभिमानी बनाउन सकेन।
मैले फेरि स्वाभिमानको पोखरीमा आफ्नो अस्तित्व खोज्न थालेँ। गौरवको महसुस गर्न जिन्दगीमा आफूले गरेका काम कुराहरू सोच्न थालेँ। एकचोटि लाग्यो आफूले पुर्‍याएको योगदानको कुरा गर्दा अहम्पना र घमन्ड हुन खोज्ला। तर मलाई लाग्यो आफ्नो क्रियाकलापप्रति कहिलेकाहीँ घमन्ड पनि हुनुपर्दाे रहेछ मान्छेमा। सरल भाषामा हामी घमन्ड शब्द प्रयोग गर्छौँ, तर कूटनीतिक भाषामा यसलाई स्वाभिमान पनि भन्न सकिन्छ। आफूले आफैँलाई स्वाभिमानी बनाउने क्रममा मैले अस्पतालको खाटमा बस्ताबस्तै आँखा चिम्लेर तीस वर्षपहिले चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्दाका क्रियाकलापहरू सम्झेँ। असनको एउटा सानो गल्लीमा जन्मेर देशका अनकन्टार दुर्गम क्षेत्रहरूमा पैदल घुमेका कष्टपूर्ण दिनहरू याद गरेँ। स्याल कराउने ठाउँ ठमेलमा पर्यटन–विकासका लागि गरेको औद्योगिक प्रयासलाई स्मरण गरेँ। अन्नपूर्ण क्षेत्रका उकाली–ओरालीमा जैविक विविधता अध्ययन गरेर संरक्षण र विकासको अवधारणा तयार गरेको अनि क्यान्सर अस्पतालदेखि नेपाल भ्रमणवर्ष र केशरमहलको स्वप्नबगैँचासम्मको विकासयात्रासम्ममा आफूले गरेका केही ठोस योगदानहरू सम्झेँ।
मेरो अन्तरात्मामा एउटा आभास भयो — मैले जिन्दगीमा केही न केही त गरेकै रहेछु, र यसले मनमा सन्तोष जगायो। आफ्नो जीवन–इतिहास पल्टाउने क्रममा मैले आफ्नो मनभित्र एउटा तराजु पनि बनाएँ जसको एउटा भागमा आफूले आफैँलाई राखेँ र तराजुको अर्काे भागमा अर्काे एउटा कर्ण शाक्यलाई राख्न खोजेँ। तुरुन्तै मैले अर्को कोही पाइनँ तराजुको अर्का भागमा राखेर जोख्न। नेपालमा अथाह धनसम्पत्तिका मालिकहरू छन्। धेरै धन भएका धनाढ्यहरू छन्। तर श्रमजीवी भएर उद्योग सञ्चालन गर्ने र समाजलाई ठोस योगदान पुर्‍याउनेहरू त्यति धेरै पाइनँ। भाषणैभाषण गरेर नेता बन्ने पनि धेरै छन्, तर भाषणअनुसारको काम गर्ने मान्छे त्यति धेरै छैनन्। यहाँ धेरै सपना देख्नेहरू छन्, तर सपनालाई साकार पार्नेहरू कम छन्। दार्शनिक कुरा गर्नेहरू धेरै छन्, तर दर्शनलाई व्यवहारमा उतार्नेहरू कम छन्।
मलाई आश्चर्य लाग्यो — आशा र निराशाको पिङमा झुलिरहेको अवस्थामा मसित भएको भौतिक धनले मलाई स्वाभिमानी बनाउन सकेन, तर समय–समयमा आफूसित भएको सीमित स्रोत र साधनलाई परिचालन गरेर परिवारमा, समुदायमा, समाजमा र राष्ट्रमा सानातिना कामहरू गरी केही हदसम्म योगदान दिन सकेकोमा मैले आफूलाई सन्तुष्ट पाएँ र त्यही सन्तुष्टिले मलाई विस्तारै गौरवान्वित र बलियो पनि बनायो।
जिन्दगीको मूल्याङ्कन लम्बाइले होइन, गहिराइले गर्ने हो। जिन्दगीको सार गहिराइमा पाइन्छ। सयवर्ष मूल्यहीन जिन्दगी बिताउनुको के अर्थ? जिन्दगी
अर्थपूर्ण भयो भने छोटै समय जिउनुमा पनि मजा आउँछ। मोतीराम भट्टको ३० वर्षमा देहावसान भयो, नेपोलियनले अल्पायुमा नै संसारलाई जिते। परजीवी भएर १०० वर्ष बाँच्नुको के सार? त्यही बेलादेखि मैले आफूलाई बलियो पार्ने कोसिस गरेँ र आज पनि त्यो आत्मबल, आत्मविश्वास र स्वाभिमानले केही हदसम्म मलाई बलियो बनाइरहेको छ। वास्तवमा आत्मबल र स्वाभिमान नै जिन्दगीको सबभन्दा ठूलो सञ्जीवनी हो।
जब आफ्नो मन बलियो भयो, मेरो मुहारबाट डर गायब भयो। म हाँस्न सकेँ, खुला दिलले कुरा गर्न सकेँ र आङ्खना छोराछोरी र श्रीमतीलाई पनि
आफूलाई क्यान्सर लागेको कुरो स्पष्ट भन्न सकेँ। जब मैले आफ्नो भावनालाई स्पष्ट व्यक्त गरेँ, क्षणभरका निमित्त मेरो परिवारलाई केही मानसिक कष्ट अवश्य भयो। तर मलाई थाहा थियो, उनीहरूले पनि वास्तविकतालाई स्वीकार्नेछन् र विस्तारै उनीहरू पनि बलिया हुँदै जानेछन्। मलाई अलि बढी कठिन मेरी कान्छी छोरीलाई आफूलाई लागेको क्यान्सरको खबर दिँदा भयो। अस्पतालकै टेलिफोनबाट मैले कान्छी छोरीलाई आफ्नो मेडिकल रिपोर्टबारे खुलस्त रूपमा तर क्यान्सर शब्द उच्चारण नगरीकन विषयवस्तुलाई घुमाइफिराई बताउन खोजेँ। तर जब छोरीले सिधासिधा प्रश्न गर्न लागिन्, स्पष्ट जवाफ दिन मलाई साह्रै
गाह्रो भयो। क्यान्सर एउटा यस्तो शब्द हो जो अहिलेको आधुनिक र विकसित समयमा पनि उच्चारण गर्न हिच्किचाइन्छ। भन्नेलाई पनि भन्न गाह्रो हुन्छ र सुन्नेलाई पनि सुन्न।
क्यान्सर रोगमा सबभन्दा गाह्रो क्षण हो ‘क्यान्सर लाग्यो’ भन्नु। हरेक बाबुका निमित्त छोराछोरीको मन सधैँ कमलो हुन्छ। मैले पनि कान्छी छोरीको कमलो मनमा ठेस पुग्न जाला भनेर घुमाइफिराई कुरा गरिरहेको थिएँ। तर आत्माको आत्मासित कुरा हुन्छ। कुरालाई जतिसुकै बङ्ग्याए तापनि त्यसको मर्म लुकाउन सकिँदैन। टेलिफोनको अर्काे छेउमा मैले आङ्खनी छोरीको मुख नदेखे तापनि उनको मुहारमा आएको मनोव्यथालाई म स्पष्टै अनुमान गरिरहेको थिएँ। जब छोरीले मलाई प्रश्नमाथि प्रश्न सोधिन्, आखिर मैले वास्तविक तथ्यलाई लुकाउन सकिनँ र पछि विस्तारै स्पष्ट रूपमा भनेँ, ‘छोरी ! ड्याडीको प्रोस्टेटमा क्यान्सरको लक्षण देखियो। तर तिमीले डराउनुपर्दैन। यो भर्खर–भर्खरको भएको हुँदा यसलाई उपचार गरेर निको पार्न सकिन्छ।’
छोरीलाई ढाडस दिँदै मैले फेरि भनेँ, ‘प्रोस्टेटको क्यान्सर निको पार्न अस्ााध्यै सजिलो छ र विज्ञानले यसका लागि उपचारका धेरै प्रक्रियाहरू पनि विकास गरिसकेको छ।’ टेलिफोनबाट मैले छोरीको कुनै आवाज सुनिनँ। मलाई थाहा भयो उनी स्तब्ध भएकी छन् र अवश्य पनि आवाजलाई दबाएर लुकाएर रोइरहेकी छन्। पछि छोरीले अङ्ग्रेजी भाषाबाट रोकिई–रोकिई ‘ड्याडी, टेक केयर अफ योरसेल्फ’ भन्दै टेलिफोन तुरुन्तै राखिदिइन्। कान्छी छोरीसँगको टेलिफोन वार्तालाप धेरै कष्टदायी थियो। अगाडि जेठा छोरा सुनील बसिरहेका थिए। टेलिफोनवार्तापश्चात् मेरो आँखाबाट आउने आँसुलाई मैले रोक्न सकिनँ। केही क्षणमै सुनीलका आँखा पनि रसाउन थालिहाले। तर मलाई थाहा थियो मेरो परिवारले यसलाई स्वीकार्दै जानेछ र भोलिको समय त्यति गाह्रो हुने छैन।
प्रोस्टेटमा जब क्यान्सर भेटियो, मैले त्यही बेला विदेशमा गएर प्रोस्टेटको शल्यक्रिया नगर्ने विचार गरेको थिएँ। बायोप्सीपश्चात डा. सुधीर रावलले तीन हप्तापछि शल्यक्रिया गर्ने समय दिए। बायोप्सी गर्नासाथ अपरेसन गर्न नहुने रहेछ। बायोप्सीको घाउ निको भएपछि मात्र अपरेसन गर्नुपर्ने हुँदा तीन हप्तासम्म अब कसरी उपचार गर्ने भन्नेबारेमा परिवार र साथीहरूसित छलफल गरेँ। प्रोस्टेटको क्यान्सरलाई वास्तवमा तीन किसिमले उपचार गरिँदो रहेछ : पहिलो श्ाल्यक्रिया, दोस्रो रेडियोथेरापी र तेस्रो हार्माेनथेरापी। तीनवटै उपचारका प्रक्रियाहरूबाट हुने फाइदा र बेफाइदाबारे मैले मूल्याङ्कन गरेँ र अन्तमा मेरो
प्रोस्टेटको स्थिति राम्रो देखिएको हुँदा शल्यक्रिया नै गरेर ºयाँकियो भने पछिसम्म क्यान्सर नदोहोरिने सम्भावना बढी भएको हुँदा शल्यक्रिया गर्ने नै विचार गरेँ।
कुनै पनि कडा रोगको उपचार गर्दा, खास गरी शल्यक्रियाजस्तो प्रविधि अपनाउँदा हामीले यसका बारेमा विस्तृत जानकारी त अवश्य पनि लिनुपर्छ। तर जानकारी लिने क्रममा के गर्ने के नगर्ने भनेर अल्मलिइरहनु पनि हुँदैन। आफूमा विश्वास जगाउनैपर्छ। हरेक दृष्टिकोणबाट मनमा आशा जगाएर र आफूलाई उपचार गर्ने डाक्टरलाई विश्वास गरेर मेरा लागि यही प्रविधि राम्रो हो भनी ठोकुवा गरी उपचार गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ यसले धेरै फाइदा पुर्‍याउँछ। मैले पनि त्यही गरेँ।
जब शल्यक्रिया गर्ने कुरा उठे, छोराहरूले बैङ्कक वा सिङ्गापुरमा शल्यक्रिया गर्न जोड दिए। तर मैले मानिनँ। मैले डा. रावलमाथि विश्वास गरेँ र दिल्लीमा नै शल्यक्रिया गर्ने निधो गरेँ ताकि मलाई कुनै आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र पारिवारिक तनाव नहोस्। यो निर्णय लिन मलाई सजिलो भएन। सायद विदेशमा गएर उपचार गर्न सक्ने मान्छे ठानेर होला धेरै साथीभाइले अनेक सरसल्लाह दिए। केही समय त बाबु र छोराहरूको विवादै भयो। छोराहरूको डर थियो पैसा बचाउन बाबुको उपचार महँगो अस्पतालमा गराएनन् भन्लान् कि भन्ने। हो, बैङ्कक र सिङ्गापुरका अस्पतालहरू सुव्यवस्थित छन् र त्यहाँका उपकरण पनि अत्याधुनिक छन्। तर स्वास्थ्यको उपचार मेसिन र उपकरणबाट मात्र गरिँदैन, डाक्टरको दिमागले पनि गर्नुपर्छ। तसर्थ मैले आङ्खनै देश नेपाल वा हिन्दुस्तानका डाक्टरहरूमा नै भर पर्ने विचार गरेँ। किनभने उनीहरू विदेशी डाक्टरहरूभन्दा कम दिमाग भएका छैनन्।
दिल्लीमै उपचार गर्ने हो भने एपोलो अस्पतालमा शल्यक्रिया गराउने हो कि भनी सल्लाह पनि दिए, ताकि क्यान्सर भएको कुरो अरूलाई थाहा नहोस्। तर मैले राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमै जून महिनाको १४ तारिखमा शल्यक्रिया गराउने निधो गरेँ। आफूलाई क्यान्सर लागेको कुरो लुकाउन चाहिनँ। यतिमात्र होइन आफूलाई क्यान्सर भएको विषयमा लेखहरू लेखेर विभिन्न पत्रपत्रिकामा छपाएँ। डरसित भागेर मान्छेले कहाँ लुक्ने? भाग्यो भने डरले झन् लखेट्छ। बरू डरसित डटेर मुकाबिला गर्न सकियो भने आत्मबल बलियो हुन्छ।
आफ्नो क्यान्सर रोगबारे मैले आङ्खना परिवार, इष्टमित्र र साथीभाइहरूलाई विनाहिच्किचाहट खुलेर भनिसकेको हुँदा मलाई अरूसित कुरा गर्दा त्यती अप्ठ्यारो परेन। रोगलाई लुकाएर या यसबारे बोल्न डराएर अरूलाई केही नभनेको भए मलाई हरदिन हरपल जीन्दगी बिताउन गाह्रो हुने थियो। जब म कसैसित कुरा गर्थे‘, एक न एक दिन त उसले अवश्य थाहा पाउने थियो मलाई क्यान्सर लागेको कुरा। अनि जब म ऊसित कुरा गरिरहेको हुने थिएँ, ऊ केही नबोलीकन आँखाबाट मलाई दया र मायाको भावनाले हेरिरहेको हुने थियो, जुन मलाई स≈य र सजिलो हुँदैनथ्यो। आफूलाई कसैले दयाको पात्र बनाउने कुरा सोच्नै सक्तिनँ। जब कसैलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ मलाई के भएको छ, अनि ऊसित कुरा गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। आज मलाई कसैसित कुरा गर्दा कुनै सङ्कोच र अप्ठ्यारो पर्दैन र यसले मेरो आत्मबल बलियो बनाउँछ।
आत्मबल बलियो भएपछि खुलेर वार्तालाप गर्न सकिन्छ, भावनाहरू अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ, अनि मुहार नै हँसिलो पारेर कुरा गर्न सकिन्छ। जब मसित कुरा गर्ने व्यक्तिले मेरो मुहारमा कुनै चिन्ताको सङ्केत देख्तैन, उसलाई पनि मसित कुरा गर्न धेरै सजिलो हुन्छ। यही आत्मबलका कारण मलाई बाँच्न धेरै सजिलो भएको छ।
आखिर मैले १५ दिनपछि वि.सं. २०६३ जेठ ७ गते डा. सुधीर रावलकै हातबाट शल्यक्रिया गर्ने निर्णय गरेँ। राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा प्राइभेट कोठा दुई–तीन्ावटा मात्रै रहेछन्। सामाजिक ट्रस्टबाट सञ्चालन गरिएकोले यसमा सबै कमन वार्डहरू मात्रै रहेछन्। प्राइभेट वार्ड लिन धेरै गाह्रो पर्ने भएको हुँदा मैले भारतीय राजदूतावासबाट पत्र लिएर ट्रस्टका अध्यक्षसँग कुरा गरेको थिएँ र बल्लबल्ल अस्पतालको एक मात्र भी. आई. पी. कोठा बुक गर्न सकेको थिएँ।
जुन बेला मेरो शल्यक्रिया भयो, त्यो बेला मेरो परिवारका सबैजना मेरै साथमा थिएँ : दुई छोरा, छोरी अनि श्रीमती। मेरा मित्र दिवाकर राजकर्णिकार पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। सबैको अपार माया र ढाडस पाएकोले अपरेसन गर्न जाँदा मनमा कुनै डर–त्रास भएन। आफू पनि हँसिलो मुहारले अपरेसन थिएटरतिर गएकाले कसैको मुहारमा कुनै टेन्सन भएन। उनीहरूको मुहारमा टेन्सन नदेखेपछि मलाई पनि टेन्सन भएन। मैले बेलायत वा अमेरिकामा गएर शल्यक्रिया गरेको भए के मेरो परिवारका सबै सदस्यहरू र मेरा साथीहरू सँगै हुन्थे होलान् त? हदसेहद भइदिएको भए मेरा एउटा छोरा र श्रीमती मसित हुन्थे होलान्। अपरिचित समाजमा कडा रोगको उपचार गर्न जाँदा बिरामीलाई भन्दा पनि बिरामीकुरुवाहरूलाई ठूलो आघात पुग्छ। अन्ततोगत्वा यसले बिरामीलाई नै मानसिक दबाब दिन्छ। खास गरी घरको मुली बिरामी भइदियो
भने मुलीले परिवारको मानसिक, शारीरिक र आर्थिक कठिनाइमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। यस्तो दबाब खप्न सजिलो हुँदैन। यो त भुक्तभोगीलाई मात्र थाहा हुन्छ।
शल्यक्रिया गर्न झन्डै दुई घन्टाजति लाग्यो होला। तीन–चार घन्टासम्म होसै आएन। जब आई. सी. यू. मा मेरो आँखा खुल्यो, मैले स्पष्ट रूपमा केही देखिनँ। रक्सी खाएको मान्छे झुलेजस्तो झुलझुलाहट थियो। कहिले के–के सुन्ने, कहिले नसुन्ने। जब मलाई पूरा होस आयो, त्यो बेला मेरो पेटको दायाँ–बायाँ पाइप जडान गरी पिसाब सङ्कलन गर्न रबरका ब्यागहरू झुन्ड्याइएको पाएँ। घाउ त धेरै दुखेन, तर दिसा–पिसाबले च्याप्ने र यताउता चल्न नहुने अवस्थाले गर्दा अत्यन्तै असजिलो अनुभव भइरहेको थियो। कस्तो विडम्बना ! वर्षमा ३६५ दिन हुन्छ, तर दुई दिनको अस≈य पीडाले नै वर्षको सम्पूर्ण लामो समयलाई ठ्याम्मै बिर्साइदिन्छ। दुःख र पीडाका क्षणहरू पलपल गरी कसरी विस्तारै बित्दा रहेछन्, त्यस्तो बेलामा मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। अपरेसनको टाँका ननिकालेसम्म चौध दिनसम्म म अस्पतालमै बसेँ। अस्पतालमा बसुन्जेल पिसाबले च्याप्ने र आउँजस्तो लाग्ने असजिलो पीडाले चौबीसै घन्टा सताउन थाल्यो। सुत्ने औषधिले पनि छोएन। पहिले विपश्यना गरेको अनुभवबाट ध्यान गरेर पीडालाई नियन्त्रण गर्न खोजेँ, तर कहाँ सक्नू ! ध्यान गरेर एकचित्त हुन खोज्दा पीडा झन् अस≈य हुँदो रहेछ।
पेटमा जडान गरेको पाइप ननिकालेसम्म अर्थात् दुईहप्ता म अस्पतालमै बसेँ। एक हातले पाइप र अर्काे हातले ब्याग समात्दै म विस्तारै–विस्तारै वार्डमा ओहोरदोहोर गरिरहन्थेँ। अस्पतालको लबीमा मात्र ओहोरदोहोर गरिरहँदा दिक्क लागेपछि हरियो घाँसमा खुट्टा टेक्न रहर लागेर म एक दिन मेरी श्रीमतीका साथ अस्पतालको बगैँचामा डुल्न गएँ। बगैँचाको एउटा कुनामा एकजना लोग्नेमान्छे र एउटी आइमाई बसिरहेका थिए। उनीहरूसँगै एउटा टिनको बाकस, रातो प्लास्टिकको झोलामा केही मालसामान र दोलाइँ भएको एउटा पोको थियो। नेपालीजस्ता लागेका हुँदा मैले उनीहरूलाई ‘के तपाईँहरू नेपालबाट आउनुभएको हो?’ भनी सोधेँ। अन्दाजी ५५–६० वर्षका ती मान्छेले ‘हो हजुर, हामी भैरहवाबाट आएका, हाम्रो घर पाल्पाबाट दुई–तीन कोस टाढाको गाउँमा पर्छ’ भने। भैरहवाका डाक्टरले उपचार गर्न दिल्ली जाऊ भनेका हुँदा छोरालाई लिएर दुवै लोग्नेस्वास्नी पहिलोपल्ट दिल्ली आएका रहेछन्। छोराचाहिँ डाक्टरको समय माग्न रिसेप्सनमा सोधपुछ गर्न गएका रहेछन्। बाबुचाहिँलाई पेटको क्यान्सर भएको रहेछ। लोग्नेस्वास्नी दुवैलाई थाहा रहेछ क्यान्सर भन्ने रोग कडा छ भनेर। तर उनीहरूलाई त्यो रोगका बारेमा विस्तृत जानकारी रहेनछ।
उनीहरूसित भलाकुसारी गर्दागर्दै बिरामी मान्छेका छोरा पनि त्यहीँ आइपुगे। मलाई नमस्कार गर्दै उनले ‘हजुर पनि यहाँ उपचार गर्न आउनुभएको?’ भनेर सोधे। उनीहरू दुईदिन पहिले दिल्ली आई रेलवे–स्टेसनसँगैको एउटा होटलमा बसेपछि त्यही दिन झिटिगुन्टा बोकेर ट्याक्सीबाट राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा आएका रहेछन्। मैले उनीहरूलाई भनेँ पनि, ‘किन त्यति महँगो पैसा तिरेर ट्याक्सीबाट आउनु भएको? दिल्लीको कनाट प्लेसबाट अस्पतालसम्म आउन त ट्रेन छँदैछ नि ! ट्रेन सस्तो पनि छ र चाँडो पनि आइपुग्छ।’ तर उनीहरूले दिल्लीका बारेमा के थाहा पाउनु ! जिन्दगीमा पहिले कहिल्यै आएका भए पो !
त्यो बिरामी मान्छेको गला सुकिसकेको थियो, आँखामा कुनै चमक थिएन। श्रीमतीचाहिँको मुहार हेर्दा उनलाई एउटा अत्यास, अन्योल र भयले सताइरहेझैँ देखिन्थ्यो। उनी हामीसँग हाँस्न खोज्थिन्, तर हाँस्न सक्तिनथिन्। बोल्न खोज्थिन्, तर बोल्न सक्तिनथिन्। छिनछिनमा उनी आºनो बिरामी लोग्नेको हात सुमसुम्याउन पुग्थिन्। अनि माया भरिएको आँखाले आºनो लोग्नेको मुख ताकिरहन्थिन्। लोग्ने–स्वास्नीको त्यो आन्तरिक र मर्माहत व्यथालाई महसुुस गरेर मेरो मन चिसिइरहेको थियो। तर आºनो भावनालाई प्रकट गरिरहेको थिइनँ। बीचबीचमा मेरी श्रीमती सुशीला उनीहरूका बारे थप जानकारी लिन खोज्थिन्। तर म उनलाई नेवारी भाषामा रोक्थेँ। किनभने त्यस्तो संवेदनशील अवस्थामा उनीहरूसित रोगको डरलाग्दो पक्षका बारेमा छलफल गर्नु उपयुक्त थिएन।
बिहानको अन्दाजी दस–एघार बजिसकेको थियो, लोग्नेस्वास्नी दुईटैको मुख सुकेको थियो। सायद उनीहरूले त्यस बेलासम्म खाएकै थिएनन्। सुशीलाले आफूले बोकेर ल्याएको मिनेरल वाटर उनीहरूलाई दिइन्। बिरामीले अलिकति पानीको घुट्को पिएपछि ‘ल तिमी पनि अलिकति पिऊ’ भन्दै पानीको बोतल श्रीमतीको हातमा स्नेहपूर्वक थमाइदिए। उनकी श्रीमतीले पनि तिर्खा रोक्न नसकेर पानीको बोतल आºनो मुखभन्दा एक इन्च माथि राखी घटघट पानी पिइन्। पानीको हरेक घुट्को निल्दा उनको घाँटीको कण्ठी तल–माथि चलिरहेको थियो। पानीको खूबै प्यास लागेको रहेछ उनलाई, त्यसैले स्वाद लिएर पानी पिइन्। पानी पिइसकेपछि उनले छोरालाई पानीको बोतल समाउन दिइन्।
छोराचाहिँ एकदम अलमलमा देखिन्थे। उनको दिमागमा त्यो बेला सायद कसरी डाक्टरको समय लिने, अस्पतालमा बाबुलाई कसरी भर्ना गर्ने, कति खर्च हुन्छ र कहाँ बस्ने आदि–इत्यादि कुराहरू खेलिरहेका थिए होलान्। उनलाई त्यहाँको वस्तुस्थितिको कुनै भेउ थिएन।
बाबु बिरामी, आमा अनभिज्ञ। त्यस्तो बेलामा छोराको दुर्दशा र पीडा भुक्तभोगीले मात्र अनुभव गर्न सक्छ। मैले ती छोराचाहिँको वेदना राम्ररी अनुभव गरिरहेको थिएँ। २५–३० वर्षका ती केटा र उनको परिवारको आर्थिक अवस्था र दुःखबारे मैले धेरै जानकारी लिन चाहिनँ। किनभने उनीहरूका बारेमा जति बढी थाहा भयो, उति नै बढी मलाई दुःख हुन्थ्यो। मलाई लाग्यो अब मैले यहाँ उनीहरूसित धेरै बस्नु हुँदैन, त्यसबाट मलाई पीरमाथि पीर थपिन्छ। मैले मनमनमा विचार गरेँ ‘अब जाऊँ उठेर, अब यिनीहरूलाई आङ्खनै भाग्यमा छाडिदिऊँ। तर मनले मानेन। एकचोटि मैले केटाले काखीमा च्यापिराखेको बिरामीको मेडिकल रिपोर्ट हेरेँ। रिपोर्टमा फोक्सोमा क्यान्सर भएको डाइग्नोसिस गरिएको रहेछ। स्टेज पनि चर्कै खालको देखिन्थ्यो। नेपालका डाक्टरले अब यहाँ उपचार हुँदैन भनेपछि उनीहरू दिल्लीमा आएका रहेछन्।
सुशीलाले मलाई खुसुक्क नेवारी भाषामा भनिन्, ‘यिनीहरूले बिहानदेखि केही खाएका छैनन् जस्तो छ। क्यान्टिनमा गएर म केही खाने कुराहरू किनेर ल्याउँछु।’ म्ौले सुशीलालाई अलि बढी नै खाना किनेर ल्याऊ भनी पठाएँ। एकैछिनमा उनी केही पराठा, आलुचप र पाउरोटीहरू लिएर आइन्। छोराचाहिँले लाज मानेर भने, ‘होइन हजुर, अलि–अलि खाना त हामीले पनि ल्याएका छौँ, किन दुःख गर्नुभएको?’
‘होइन–होइन, केको दुःख ! तपाईँहरूलाई कहाँ खाना किन्ने भनेर थाहा छैन नि ! लिनुस्, खानुस्’ भन्दै सुशीलाले खानाको पोको बिरामीका अगाडि राखिदिइन्। बिरामीले मसिनो सास हाँङ्खतै सानो स्वरले स्वास्नीलाई हेरेर भने, ‘तिमीलाई भोक लाग्यो होला, ल तिमी खाऊ। हिजो राति पनि तिमीले केही खाइनौ !’ तर पेटमा भोकको आगो दन्किरहे पनि आºनो बिरामी लोग्नेलाई नखुवाई उनले खान चाहिनन्। पोकाबाट एउटा पराठा निकाल्दै पहिले उनले आºनो लोग्नेलाई दिइन्। उनीहरूको त्यो अपार माया–पिरती देखेर सुशीला र मैले अलिकति खुसी र अलिकति दुःख मानेर एक–अर्कालाई हेर्‍यौँ।
नदीको तीरमा माया गरी बस्न्ो चखेवा–चखेवीहरूको जस्तो उनीहरूको मायाप्रीतिको त्यस्तो मार्मिक दृश्यलाई हामीले धेरै बेर हेर्न सकेनौँ। मेरो छाती अलि फुलेर आयो, अलि गह्रौँ भएर आयो। त्यो बेला सुशीला झन् आत्तिएकी जस्तो लाग्यो। उनले आºना आँखाको आँसु रोक्न सकिनन्, अनि खुरुक्क उठेर अन्तै गइन्। ती बिरामी मान्छेले सुकेको मुखबाट थुक निलेर लामो सास तान्दै, ‘खै हजुर, मानिसको जिन्दगीमा के–के दुःख आउँदो रहेछ’ भने। अनि आºनो छोराको काँधमा हात राखेर ‘यो बिचरोलाई हामीले कति दुःख दिने, हामी दुवैजना अनपढ छौँ, केही थाहा छैन, अब यो एकजनाले मात्र के–के गर्ने हो’ भन्दै सुस्केरा हाली मनको बह पोखे।
त्यो बेला उनका छोराको मनमा अब के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने अनेक प्रश्नले पिरोलिरहेको हुँदो हो, त्यसैले बाबुका ती मार्मिक शब्दहरूले उनलाई केही असर पारेनन्। उनलाई त्यस बेला पीर मान्ने फुर्सद पनि थिएन। उनी त त्यो बेला कहाँ बस्ने, कसरी डाक्टरको समय लिने आदि अन्यँेल्’पूर्ण अवस्था र व्यवस्थामा अल्भि्करहेका थिए। केटाको अवस्था देखेर मैले हाम्रो दिल्लीस्थित ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्ने एउटा केटालाई मोबाइलमा फोन गरेर उनका लागि डाक्टरको बउउयष्लत्कभलत लिने व्यवस्था गरिदिएँ र उनीहरूलाई धन्धा नमान्न ढाडस दिएँ। त्यसपछि केटालाई अस्पतालसँगैको एउटा सानो लजमा पहिले बस्न जान, पछि मात्र बाबुलाई अस्पतालमा जचाउन सल्लाह दिएँ।
मैले र सुशीलाले उनीहरूसित धेरै बेर कुरा गरिरहन सकेनौँ। मलाई डर पनि लाग्यो उनीहरूका बारेमा अरू थ्ाप जानकारी लिएँ भने म उनीहरूलाई सहयोग दिन सकौँला कि नसकौँला भनेर। खास गरी बिरामीको अवस्था निराशाजनक स्थितिमा पुग्यो भने कहिलेकाहीँ जतिसुकै सहयोग गर्न चाहेर पनि गर्न सकिँदैन, झन् म त आफैँ बिरामी। त्यसैले एकैछिन कुरा गरेर उनीहरूसित बिदावारी भई म र सुशीला अस्पतालको कोठामा फर्कियौँ।
क्यान्सरसम्बन्धी यस्ता दुःखद कुराहरू सम्भि्कँदा कहिलेकाहीँ मनमा रिस पनि उठ्छ, खास गरी जब निको नै नहुने बिरामीहरूलाई नेपालबाट डाक्टरले विदेशमा उपचार गर्न पठाएको पाउँदा। विपन्न परिवारका यस्ता निको नहुने terminal cancer patientहरूलाई नेपालमै भएका क्यान्सर अस्पतालहरूमा किन पठाइँदैन? किन दिल्लीसम्म पठाइन्छ? नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिको सदस्य हँुदा म त्यहाँका सम्बन्धित डाक्टरहरूलाई सधैँ आग्रह गर्थे‘, ‘बिरामीको रोग निको हुँदैन भने कृपया बिरामी र बिरामीका परिवारलाई झुलाउने र झुक्याउने काम नगरौँ। उनीहरूले थाम्नै नसक्ने आर्थिक र मनोवैज्ञानिक बोझ दिएर झूटो आशा न्ादेखाऔँ। कुनै घरमा कसैलाई क्यान्सर रोग लाग्यो भने त्यो घरमा एकजना मात्र बिरामी हुँदैन, परिवारका सबै सदस्यहरू नै मानसिक र आर्थिक रूपले ग्रस्त हुन्छन्। कहिलेकाहीँ यस्ता विवेकहीन हेलचेक्य्राइँकँ कारणबाट कतिपय बिरामीहरूको उपचार गराउँदा–गराउँदै भएभरको सम्पत्ति बेच्नुपर्ने हुन्छ र अन्तमा बिरामी एकजना मात्र होइन, सम्पूर्ण परिवार नै आर्थिक रूपले सङ्कटग्रस्त हुन्छ। त्यस्तो दुःखद अवस्थामा हामीले मन मारेर भए पनि कठोर तर व्यावहारिक बाटो अपनाउनुपर्छ। कडा रोगबाट अन्तिम अवस्थामा पुग्न लागेका terminal cancer patientहरूलाई महँगा–महँगा केमोथेरापी दिएर बिरामी र उसको परिवारको पैसा बर्बाद गराउनुको सट्टा सस्तो जडिबुटी र अन्य प्रशोधित परम्परागत औषधि दिएर बिरामीलाई आशा जाग्ने खालका धार्मिक र आध्यात्मिक कामहरू गर्न–गराउन लगाउनुपर्छ। यसो गर्दा बिरामीको मन पनि शान्त हुन्छ र तिनका परिवारको आर्थिक अवस्था पनि बिग्रँदैन।’
नेपालबाट प्रशस्त बिरामीहरू राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गर्न पुग्छन्, कोही निको हुने खालका त कोही निको नहुने खालका। हाम्रंा गाउँघरमा क्यान्सर रोग पत्ता लगाउने चेतना र प्रविधि नभएका कारणबाट बिरामीहरू रोगले धेरै च्यापिसकेपछि मात्रै डाक्टरकहाँ जँचाउन जान्छन्। यसमा बिरामी र उसको परिवारलाई दोष दिन पनि मिल्दैन। किनभने यो रोग पहिले दुख्तैदुख्तैन। रोगले नराम्ररी च्यापेपछि मात्र अन्य लक्ष्’णहरू देखापर्छन्। अनि डाक्टरकहाँ देखाउन जाँदा धेरै ढीलो भइसकेको हुन्छ।
राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा बचाउन सकिने थुप्रै बिरामीहरू पनि पुग्छन्। खास गरी पेटमा क्यान्सर लागेका साना–साना बच्चाहरूलाई त्यहाँ लगिँदो रहेछ। त्यो बेला नेपालबाट झन्डै चारजना बच्चाहरूलाई क्यान्सरको उपचार गराउन त्यहाँ लगिएको थियो। साना–साना बच्चाहरूलाई पेटको क्यान्सर हुँदो रहेछ। नेपालमा अहिले पनि त्यसको उपचारमा खास कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। एउटा बच्चा बिरामी भयो भने तीन–चार महिनासम्म आमाबाबु दुवैले उसको उपचारका लागि दिल्लीसम्म पुग्नुपर्छ। म कल्पना पनि गर्न सक्तिनँ उनीहरू त्यो दुःख कसरी सहन्छन्। तर मान्छे बडो बलवान् हुँदो रहेछ। जस्तोसुकै दुःख पनि मानिसले सहन सक्छ। घरका सबै
काम छोडेर बिरामी बच्चाको उपचार गर्न तीन–चार महिनासम्म अस्पतालमै बसिरहँदा उनीहरूलाई शारीरिक, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सङ्कट कति पर्छ, सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालको कमन रूममा बच्चालाई खाटमा सुताइँदो रहेछ अनि खाटमुनि कहिले आमा त कहिले बाबु आलोपालो गरेर सुत्ने गर्दा रहेछन्। दिनभरिचाहिँ बच्चालाई बोकेर अस्पतालको कोठाबाहिरको लबीमा ओहोरदोहोर गरिरहँदा रहेछन्। बच्चाहरूलाई खेलाउन भनेर राखिएको एउटा सानो कोठा रहेछ। त्यहाँ दुई–चारवटा खेलौनाहरू राखिएका रहेछन्।
मैले डा. रावलको सहयोगबाट अस्पतालका अध्यक्ष र केही सञ्चालकहरूसित कुरा गरेर बच्चा खेल्ने कोठामा रङ्गरोगन गरी अलि रमाइला तस्बिरहरू राखिदिन अनुरोध गरेँ। आङ्खना तर्फबाट पनि मैले त्यहाँ एउटा डीभीडी र थुप्रै कार्टुन–फिल्महरू किनेर बच्चाहरूलाई फिल्म देखाउने व्यवस्थाका लागि ट्रस्टसित अनुरोध गरेँ। दुई दिनमै व्यवस्थापन पक्ष्’ले मेरो अनुरोधलाई स्वीकार्‍यो र पछि त्यो कोठा बच्चालाई रमाइलो गर्ने ठाउँ भयो। मलाई धेरै खुसी लाग्यो, किनभने त्यो ठाउँ बच्चाहरू मात्र होइन, अभिभावकहरू पनि जम्मा हुने ठाउँ भयो।
१५ दिनपछि म अस्पताल छाडेर डेरामा पुगेँ। त्यहाँ मेरा पी. ए. ले कुरियरबाट पठाएको मेलब्याग पाएँ। त्यसमा केही समयअघि मलाई क्यान्सर रोग लागेको विषयमा मैले लेखेको लेखका पाठक–प्रतिक्रियाहरू थिए। ‘कान्तिपुर’ पत्रिकामा छापिएको पाठक–प्रतिक्रियाको एउटा प्रतिलिपि पनि पठाइएको थियो। त्यसमा एकजना पाठकले क्यान्सरसम्बन्धी मेरो लेखप्रति व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्दै ‘कर्ण शाक्यलाई त कस्तो क्यान्सर पनि फापेको !’ भन्ने लेखेका थिए। पढेर खूब चित्त दुख्यो। किन मानिस सभ्यताको सीमा नाघेर आफ्नो कलम र शब्दलाई अस्त्र बनाई अरूको मन दुखाउने काम गर्छ? किन गोलीले प्वाल पार्न नसक्ने मुटुलाई बोलीले घोचेर परपीडक बन्न खोज्छ? कस्तो मनोविज्ञानले त्यहाँ काम गरेको हुन्छ? मैले अझै बु‰न सकेको छैन।
तर मेरो लेखको प्रकाशनपश्चात् आएका अन्य पाठक–प्रतिक्रियाहरू र अभिव्यक्तिहरू नकारात्मक थिएनन्। कैयौँ पाठकहरूले सकारात्मक र भावपूर्ण प्रतिक्रियाहरू पठाएर नेपाली मानवीय मनको उज्यालो पक्षलाई दर्शाएका थिए। मलाई प्रोस्टेटमा क्यान्सर लागेको कुरा थाहा पाएपछि मजस्ता थुप्रै पीडितहरूले मसँग सम्पर्क गरे। उनीहरूलाई पनि आशा जाग्यो र यसबारे छलफल गर्न अगाडि सरे। प्रोस्टेटको क्यान्सरका सन्दर्भमा राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मेरा थुप्रै डाक्टर साथीहरूले मलाई अनेक व्यावहारिक, प्रतिकारात्मक एवम् उपचारात्मक सुझावहरू दिए। ती सुझावहरू म अन्य प्रोस्टेटका क्यान्सरपीडितहरूलाई पनि सुनाउने गर्छु।
तीस वर्षपहिले अमेरिकाको जोन हप्किन्स युनिभर्सिटीमा अध्ययनरत एउटी साथी जीन टिज स्वयम्भू र पशुपतिका बाँदरको अध्ययन गर्न नेपाल आएकी थिइन्। पछि उनले सोही विश्वविद्यालयबाट क्यान्सर रोग निको पार्ने विभिन्न खाद्यपदार्थबारे धेरै अनुसन्धान गरिन्। अहिले उनी यस विषयकै ठूलो ज्ञाता भइसकेकी छन्। कताकताबाट मेरा बारे खबर पाएपछि उनले मलाई ढाडस दिँदै प्रोस्टेटमा क्यान्सर लागेर पनि मानिस २०–३० वर्ष बाँच्न सक्छ र आत्मबल बलियो भयो भने तिमी यो रोगलाई जित्न सक्छौ भन्ने आशयको पत्र लेखेर पठाइन्। डा. टिजले भनेजस्तै मैले आफ्नो आत्मबललाई बलियो पारेँ।
मलाई जीन टिजले समय–समयमा योगासन गर्नू, हरियो सागपात धेरै खानू, दिनमा एकचोटि अनारको रस पिउनू, गोलभेडा धेरै खानू, रातो वाइन पिउनू, भटमासको दूधबाट बनेको तोफू खानू, प्रोस्टेटको क्यान्सर रोक्न यसले धेरै मद्दत गर्छ भनेकी थिइन्। उनले भनेजस्तै म अहिले गरिरहेको छु। एक वर्षसम्म हरेक तीन–तीन महिनामा मैले आफ्नो रगत जाँच गराउनुपर्छ र एक वर्षपछि हरेक वर्ष पाँच वर्षसम्म रगत जँचाउनुपर्छ। पाँच वर्षपछि रगतमा PSA भएन भने क्यान्सर निको भएको सम्भि्कइन्छ।
मैले प्रोस्टेटको शल्यक्रिया गरेको वर्षदिन हुन लागिसक्यो। हरेक तीन–तीन महिनामा म रगत जँचाउँछु। भगवान्को कृपा र आमाबाबुको आशीर्वादले मेरो रगतमा अहिले PSA निर्मूल भइसकेको छ। डाक्टर रावलले खुसी भएर भनेका थिए, ‘यो सबै तिम्रो आत्मबलको कारणले हो। औषधिले त ५० प्रतिशत मात्र काम गर्छ, अर्को ५० प्रतिशत आत्मबलले।’
हुन त क्यान्सर मानव–जीवनको एउटा डरलाग्दो पक्ष मानिन्छ, तथापि निरन्तर भइरहेको वैज्ञानिक प्रविधिको नवीनतम आविष्कारबाट क्यान्सरजस्तो डरलाग्दो अभिशाप एक दिन न एक दिन अवश्य उन्मूलन हुनेछ। जीन टिज र डा. रावलजस्ता वैज्ञानिकहरूको क्रियाशील खोजले मानव–जीवनमा सधैँ आशा र विश्वास जगाउनेछ।
लुकेका प्रतिभा-कर्ण शाक्य-
राजीव गान्धी क्यान्सर अस्पतालको बिछ्यौनामा लम्पसार परिरहँदा शारीरिक र मानसिक पीडालाई बिर्सन मैले मनमा कल्पनाका लहरहरू ल्याएँ र योजनाका अनेक खँकाहरू बनाएँ। विचारका क्रममा उत्पन्न भएका ज्वारभाटाले मेरो पीडालाई केही हदसम्म मत्थर पारे। भावनाको पोखरीमा मैले जानी–नजानी पौडी खेल्ने कोसिस गरेँ। शारीरिक पक्षलाई बिर्सेर राम्रा कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न खोजेँ। कोसिस गर्दागर्दै मनमा त साँच्चै नौलो परियोजनाको स्वरूप पो सलबलाउन थाल्यो। नेपालमा कृषि, उद्योग, यातायात, संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि थुप्रै क्षेत्रमा उदाहरणीय बन्न सकेर पनि कतिपय उद्यमशील व्यक्ति र उनीहरूका सिर्जनशील क्रियाकलापहरू लुकेर बसिरहेका छन्। यदि ती लुकिरहेका विकासप्रेमी उद्यमीहरूको विवरण सङ्कलन गरेर सूची तयार पारी एउटा सानो पुस्तिका निकाल्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोच आयो।
त्यही सोचको क्रममा मैले आफ्नो मनलाई नेपालको सकारात्मक प्रगतितर्फ लगेँ। वास्तवमा विगतका विषम परिस्थितिहरूमा पनि नेपालले थुप्रै उपलब्धि हासिल गरेको छ र ठूला–साना थुप्रै उद्यमीहरूले मिहिनेत गरेर धेरै कामहरू गरी नेपाललाई सघाएका छन्। तरकारी बजारमा जाँदा जब त्यहाँ सयौँ ट्रक तरकारी बिक्री भइरहेको देखिन्छ र जब बजारका गल्लीगल्लीमा दूधका प्याकेटहरू र क्रेटका क्रेट फूलहरू बिक्री गरिएको पाइन्छ, अनि त्यस बेला आशाको किरण जाग्छ।
विगतका दिनहरूमा जब त्रिभुवन राजपथमा चक्काजाम भएको थियो र राजनीतिक पार्टीहरूले बन्द घोषणा गरेका थिए, त्यो बेला गाउँघरबाट दूध र तरकारीहरू राजधानीमा आउन बन्द भएको थियो। नेपाल बन्दका कारण गाउँको दूध र तरकारी बेच्न नपाएपछि गाउँलेहरूलाई ठूलो मर्का पर्‍यो। आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरू कहाँ बेच्ने? गाउँमा त त्यस्ता वस्तुहरूको खपत हुँदैन! त्यही बेला टेलिभिजनको समाचारमा सारा राजमार्गको चौडा बाटोमा रिसले तिल्मिलाएका कृषकहरूले ट्रकका ट्रक दूध सेताम्य पोखिदिएको दृश्य देखियो। ठाउँठाउँमा बन्दा, काउली र गोलभेडा सडकभरि छरिदिएका थिए। दूध पोखेको देखेर म चकित परेँ र मेरो सम्पूर्ण परिवार पनि आश्चर्यचकित भयो। मेरो मनमा चोट लाग्यो — कति मिहिनेत गरेर ती बिचरा कृषकहरूले यी वस्तुहरू उत्पादन गरेका होलान्! आज कुन मुटुले उनीहरूले आफैँले उत्पादन गरेका दूध र तरकारीहरू फ्याँक्न सकेका होलान्? यसो गर्नुपर्दा उनीहरू कति मर्माहत भए होलान्?
जुन बेला म अस्ट्रेलियामा पढ्न गएको थिएँ, त्यस बेला अस्ट्रेलियाको सरकारले गाईको दानाको भाउ बढायो, मासुको भाउचाहिँ बढाएन भनेर विरोधका रूपमा किसानहरूले ठाउँठाउँमा गाई–बाख्रा मारेर जमिनमुनि गाडेको दृश्य टेलिभिजनमा हेरेको थिएँ। त्यस बेला पहिले त मलाई लोभ लागेको थियो, ‘हरे, बाख्राको मासु यस्तो महँगो छ, तर यिनीहरू त्यसै काटेर फ्याँकिदिन्छन्!’ त्यो बेला अस्ट्रेलिया कति धनी देश होला जस्तो लागेको थियो। तर जब आफ्नै देशमा ड्रमका ड्रम दूध पोखेको देखेँ, त्यो बेला मनमा चोट लागे पनि केही सन्तुष्टिको अनुभव गरेँ, ‘वा! मेरो देश पनि अब गरिब रहेनछ। सारा राजमार्गलाई दूधले नुहाइदिन सक्ने भएछ।’
यी सकारात्मक उपलब्धिहरू देखेपछि ‘हाम्रो देशमा पनि कसै न कसैले केही न केही काम गरिरहेको त छ नि!’ भन्ने सन्तुष्टि जाग्छ। धेरैजनाले सिर्जनशील कामहरू गरेर समाजमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। को हुन् तिनीहरू? न त राज्यले उनीहरूलाई चिनेको छ, न त समाजले न त आम जनताले। उनीहरूको सिर्जनशील एवम् उद्यमशील प्रयासले आफूलाई मात्र होइन, पूरै समुदायलाई नै मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। ती लुकिरहेका प्रतिभाहरू याने अनसङ हिरोजहरूलाई सूचीकरण गर्दै उनीहरूका नवीनतम परियोजनाका खाकाहरू सङ्कलन गरी ‘सफलताको कथा’ नामक पुस्तिका निकाल्ने विचार त्यही अस्पतालको खाटमा जब आयो, कल्पनाको ज्यावलले मेरो अवधारणाको मन्दिरलाई तरास्न पुग्यो।
यदि नेपालका लुकेका प्रतिभाहरूलाई सूचीकृत गरी एउटा सानो पुस्तिका प्रकाशन गर्न सकियो भने यो प्रयासले छायामा परिरहेका उद्यमशील प्रतिभाहरूलाई मात्र उत्साहित गराउँदैन, स्रोत भएर साधन नभएका र साधन भएर स्रोत नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि व्यावहारिक मार्गदर्शन दिन सक्छ।
‘नेपालमा केही हुँदैन र केही गर्न सकिँदैन’ भन्ने निराशावादी मनस्थिति हावी भइरहेको बेलामा ती अनसङ हिरोहरूका सफलताका कथाहरूले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्नेछन्। त्यसले सरकारलाई पनि धरातलीय योजनाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।
अस्पतालको खाटमा बस्ताबस्तै दिमागमा यो अवधारणाको बीजारोपण भएपछि यही परियोजनामा जानी–जानी अरू विस्तृत विवरणहरू थ्ापेर दिमागको कागजमा कोर्न थालेँ। यसो गर्दा बीच–बीचमा पेट दुखेको ‰वाट्ट याद आउँथ्यो, फेरि केही क्षणमै त्यो परिकल्पनाको लहरमा डुबुल्की मार्दा पीडा हराएर जान्थ्यो। यो अवधारणालाई प्रोजेक्टमा रूपान्तरण गर्न म उत्साहित भएँ र यसलाई अगाडि कसरी लिएर जाने भन्ने योजनामा म चुर्लुम्म डुबेँ। मनको सूक्ष्म क्यामेराले ओझेलमा परेका तर उज्यालो विकासका तस्बिरहरू खिच्न थालेँ।
वनमाराबाट ब्रिकेट बनाउने, अल्लोबाट कपडा बनाउने, गाउँघरमा साना जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्ने, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि प्रयोग नगरी अर्गानिक फार्मिङ गर्ने वा स्ट्रबेरी, स्याउ, एभोकाडो, च्याउजस्ता नगदेबाली उत्पादन गर्ने वा रेन्बो ट्राउटका माछा उत्पादन गर्ने, बेल वा गुराँसका फूल वा डालेचुकको जुस बनाउने, लप्सीका विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाउने, जटामसीको तेल, हर्बल चिया आदि–इत्यादि रैथाने वस्तुहरूबाट व्यवस्थित ढङ्गले साना उद्योग सञ्चालन गरी आफूलाई मात्र होइन समुदायलाई समेत सहयोग पुर्‍याउने सिर्जनशील उद्यमीहरूको पहिचान गराई प्रोत्साहन दिन सकिने सम्भावनाले मेरो मन अझ बढी उत्साहित भयो।
‘अनसङ हिरोज’हरूका बारेको पुस्तिका प्रकाशन गर्ने यो परियोजना वास्तवमा त्यस्तो ठूलो काम होइन। न त यसमा धेरै जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ, न थुप्रै लगानी नै। तर यो सानो प्रयासले सिर्जनशील उद्यमीहरूको पहिचान हुन्छ र उनीहरूको प्रयासबाट अरूले धेरै सिक्न सक्छन्। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि धरातलीय र व्यावहारिक योजनाहरू त्ार्जुमा र कार्यान्वयन गर्नमा यसले मद्दत पुर्‍याउन सक्छ।
अस्पतालको खाटमा बसी–बसी ‘म यो गर्छु, म त्यो गर्छु’ भनेर विस्तृत योजनाका खाकाहरू तयार पारिरहँदा मैले घाउ दुख्ने र दिसा–पिसाबले च्याप्ने वेदना चटक्कै बिर्सेँ। मलाई लाग्यो योभन्दा ठूलो अर्को पेनकिलर के हुन सक्छ? यसले मेरो दुःख मात्र कम गरेन, क्यान्सरबारेका नकारात्मक सोच र विचारहरूलाई बिर्साउन सञ्जीवनीको कामसमेत गर्‍यो।
सास मात्र फेरेर जिन्दगी जिन्दगी हुँदैन। जिन्दगी बाँच्नका निमित्त हामीलाई केही न केही आधार चाहिन्छ। जब बाँच्ने एउटा आधार हुन्छ, अनि जिन्दगी बाँच्न सजिलो हुन्छ। एउटा रूखको पनि बाँच्ने आधार छ। हिउँदमा नाङ्गो भए पनि त्यो रूख वसन्तको पातलाई पर्खेर बसिरहेको हुन्छ। अनि जब त्यसमा फूल फुल्छ, फेरि त्यो रूख फलका लागि पर्खिरहेको हुन्छ। हामीले पनि आफ्नो जिन्दगीमा बाँच्नका लागि केही न केही उद्देश्य बनाउनैपर्दाे रहेछ। कमसेकम एउटा गमलामा फूलको बिरुवा रोपेर फूल फुल्ने प्रतीक्षा त गर्न सकिन्छ! बारीमा तरकारी रोपेर हरियो सागपातका निमित्त पर्खेर त बस्न सकिन्छ! शरीरले साथ दियो भने हामीले श्रमदान दिएर बाटोघाटो त बनाउन सक्छौँ! सकेनौँ भने पनि कमसेकम छोराछोरी र नातिनातिनालाई असल नागरिक बनाउने गरी हुर्काउन त सक्छौँ! यसरी कुनै राम्रो उद्देश्य लिएर जिन्दगी बाँच्न सकियो भने रमाइलो मात्र होइन, अर्थपूर्ण पनि हुन्छ। सकिन्छ भने ठूलो काम गरौँ, सकिँदैन भने भान्छामा गएर खाना पकाउन त सकिन्छ नि! मानिसको जिन्दगीमा सबैभन्दा डरलाग्दो रोग क्यान्सर हो भन्छन्, तर वास्तवमा त्यसो होइन। निराश भएर शून्य जीवन बाँच्नु नै मानवजातिको सबैभन्दा ठूलो रोग हो।
क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने क्रममा पनि जब नयाँ काम गर्ने प्रेरणा जागृत भयो, मलाई अरू बाँच्ने रहर जाग्यो। यी सकारात्मक कल्पनाले मलाई ऊर्जा दिए। त्यो बेला विगतमा कमाएको पैसाले मलाई गौरवान्वित बनाएन, बरू मेरो जिन्दगीमा गरेका केही सानातिना समाजसेवा र उपकारका कामहरूले गौरवान्वित बनाइदियो, स्वाभिमानी बनाइदियो। अनि त्यही स्वाभिमानयुक्त अर्थपूर्ण जिन्दगीलाई अगाडि बढाउन म थप जाँगरिलो हुन पुगेँ। मैले निर्णय गरेँ, ‘अस्पतालबाट घर जाने बेलामा सोचेको यो परियोजनालाई बिर्सने छैन र यसलाई कार्यान्वयन गर्न यथासम्भव कोसिस गर्नेछु।’
मलाई लाग्छ इतिहास दुई किसिमका हुन्छन् — एउटा लिखित र अर्को अलिखित। लिखित इतिहास किताबका पानामा लेखिन्छन् र अलिखित इतिहास विकासका लहरहरूमा। म यहाँ अलिखित इतिहासका पानाहरूलाई पल्टाउन खोजिरहेको छु। अलिखित इतिहासका थुप्रै नायक र पात्रहरूलाई म लुकेका प्रतिभाहरू भन्न मन पराउँछु। अझ स्पष्ट रूपले भन्ने हो भने उनीहरू नै हाम्रो यो राष्ट्रका अनसङ हिरोज हुन्। उनीहरू नाम कमाउने होडवाजीमा हुँदैनन्, बरू देशविकासका क्रममा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले आ–आफ्ना भूमिका मात्रै खेलिरहन्छन्। सायद उनीहरूलाई कसैले पनि चिनेको नहुन सक्ला, यद्यपि ती व्यक्तिहरू अलिखित इतिहासका पात्र मात्र होइन, नायकहरू नै हुन्। उनीहरूको योगदान नपाउने हो भने देशले उन्नति गर्न सक्दैन, उन्नति मात्र होइन समाजले जीविकोपार्जन गर्न पनि पाउँदैन।
विदेशमा पाइरहेको सुविधा र सम्पन्नतालाई त्यागेर एउटा नेपाली डाक्टर रामकण्ठ माकजू श्रेष्ठले समुदायलाई परिचालन गरी धुलिखेलमा उत्कृष्ट अस्पताल सफलतापूर्वक सञ्चालन गरेका छन्। डा. सुरेशराज शर्माले आफ्नै विशिष्ट शैक्षिक चिन्तन बोकेर धुलिखेलमा विश्वस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने काठमाडौँ विश्वविद्यालय बनाएका छन्। काठमाडौँकी लिली थापाका श्रीमान् द्वन्द्वमा मारिए, तर उनले आफूलाई कहिल्यै बेसहारा ठानिनन्, बरू एकल महिला समूहको संस्थागत विकास गरेर द्वन्द्वबाट उत्पीडित महिलाहरूको उत्थान गर्न पुगिन्। विराटनगरकी सीता पोखरेलले र उनका श्रीमान्ले आÏनो पुर्ख्यौैली सम्पत्ति र जागिरबाट आएको सम्पूर्ण उपदान लगानी गरेर पूर्वाञ्चल अनाथाश्रम निर्माण गर्नु माइक्रोसÏट कम्पनीका संस्थापक बिल गेट्सले अरबौँ डलर समाजसेवामा लगाएको भन्दा कम छैन। विस्तारै जब उनीहरूको योगदानले समाजमा केही परिवर्तन ल्यायो, अनि बल्ल उनीहरूलाई समाजले चिन्यो। तैपनि उनीहरूलाई देशले आवश्यक सम्मान दिन सकेन। यस्ता उदाहरणहरू खोज्यो भने थुप्रै भेटिन्छन्।
साधारण र अर्धनग्न, हेर्दा अलिअलि बहुलीपन भएजस्ता देखिने सेवाइलाल थारू सधैँ खाली जग्गा पाइयो भने रूखै मात्र रोपी हिँड्छन्। हजारौँ रूख रोपे उनले आफ्नो जिन्दगीमा। तर कसैलाई थाहा भएन। उनले रोपेका रूखहरूले हजारौँ नेपालीलाई सास फेर्नका निमित्त अक्सिजन प्रदान गरिरहेछन्। तर जुत्तासमेत नलगाई एउटा लीको भरमा हिँड्ने ती जन्मजात संरक्षकलाई कसैले चिनेनन्। देख्नेहरू पनि सायद उनलाई बहुला नै भन्थे होलान्। वास्तवमा समाजका यी अदृश्य नायकहरू असाधारण नै हुन्छन्।
असाधारण व्यक्ति मेरा लागि ती महिला पनि हुन्, जसले तीनवटी छोरी जन्माएपछि उनका श्रीमान्को युवा अवस्थामै देहावसान भयो। तर घरका मान्छेले ‘यसले हाम्रो छोराको टाउको खाई’ भनेर ती पीडित महिलालाई घरबाट निकालिदिए। तीनजना ससाना बच्चालाई खुवाउन उनले भीख पनि मागिन्। तर दुई–तीन दिनपछि नै उनलाई आभास भयो कि मैले यो जीवनमा सङ्घर्ष गरिनँ र मागेर खान लागेँ भने मेरा यी नाबालक बच्चाहरू पनि भविष्यमा मगन्ते नै हुनेछन्। तत्पश्चात् उनले आफ्नै गाउँमा गएर एकजना मान्छेको दुई
रोपनी जग्गा बहालमा लिई तरकारी खेती सुरु गरिन्। परिश्रम र मिहिनेत गरेर खेतबाट तरकारी बेच्तै उनले आफ्नो र आफ्ना बच्चाहरूको जीविकोपार्जन गरिन्। आफ्नो उद्यमशीलतालाई उजागर गर्दै ती महिलाले कीटनाशक औषधि र अन्य फर्टिलाइजर प्रयोग नगरी अर्गानिक फार्मिङ सुरु गरिन् र त्यहाँबाट उत्पादन गरेका तरकारीहरू होटल–होटलमा बेचेर आर्थिक उन्नति गरिन्। आज ती महिलाको स्थिति धेरै सुधि्रएको छ। उनी पनि हुन् हाम्रो समाजका ‘अनसङ हिरो’।
अमेरिकामा उच्च शिक्षा हासिल गरेका महावीर पुन त्यहाँको उज्यालो भविष्य र सुखद् जिन्दगी परित्याग गरेर नेपालको गाउँमा आए र गाउँलाई संसारको प्राविधिक नेटवर्कमा जोड्न खोजे, जोडे पनि। उनलाई हामीले पहिले चिनेनौँ। विश्वप्रसिद्ध म्यागासेसे पुरस्कार पाएपछि मात्र उनलाई सबैले चिने। यस्ता महावीरहरू हाम्रो देशमा कम छैनन्, जो चुपचाप आफ्नो कर्तव्यमा निष्ठापूर्वक लागिरहेका छन्। यस्ता थुप्रै महावीरहरूलाई उजागर गरेर अरूहरूका निम्ति पनि प्रेरणाको स्रोत बनाउनु र उनीहरूलाई हौसला दिनु राज्यको मात्र होइन, नागरिक समुदायको पनि कर्तव्य हो।
एकचोटि म तिलगङ्गा आँखा अस्पतालमा आँखा जँचाउन गएको थिएँ। त्यहाँ देशका कुनाकाप्चाबाट हजारौँ मानिसहरू आँखा जँचाउन आउँदा रहेछन्। रिसेप्सन काउन्टरमा गएर जँचाउने प्रक्रिया बुझेपछि कुनै झन्झटविना मैले आँखा जँचाउन पाएँ। बिरामीहरूको ठूलो चाप हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ कुनै झन्झटिलो नियम रहेनछ। अस्पताल अत्यन्तै सफासुग्घर र व्यवस्थित रहेछ। कर्मचारीहरू पनि त्यस्तै मिलनसार। मिनेट–मिनेटमा डाक्टरहरूले आँखा जाँच्दा रहेछन्। डेढ घन्टाभित्र मैले आँखाको प्रेसरदेखि मोतियाविन्दु र पावरसमेत जचाउन पाएँ। त्यो पनि सय रुपियाँभन्दा कम शुल्क तिरेर। अन्यत्र कहाँ पाइन्छ यस्तो उत्कृष्ट सेवा! नेपालमा केही पनि काम हुँदैन र गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक मनस्थिति बोकेका मानिसलाई त्यहाँ एकचोटि हेर्न पठाउनैपर्छ।
विभिन्न डाक्टरहरूसित आँखा जँचाउँदा–जँचाउँदै अन्तमा म डा. सन्दुक रुइतको कोठामा पुगेँ। ‘रमण मेगासेसे’ जस्तो गरिमामय पदक पाएर पनि डा. रुइत अत्यन्त सरल पाएँ, चाहिनेभन्दा बढी पटक्कै नबोल्ने। उनले मेरो आँखामा नानी फुलाउने औषधि राखेर ‘पाँच मिनेट आँखा चिम्लिई बसिराख्नुस्’ भनेपछि म त्यहाँ आँखा चिम्लेर केही क्षण बसेँ। अस्पतालको सक्षम व्यवस्थापनबाट म कति प्रभावित भएँ भने मेरो ‘सोच’ किताबको नाफाबाट एक लाख रुपियाँ अस्पताललाई प्रदान गर्ने विचार गरेँ र तत्कालै दिएँ पनि। हुन त यति
व्यवस्थित भइसकेको अस्पतालका लागि मेरो सानो रकमले त्यति ठूलो अर्थ नराख्ला। यद्यपि मजस्ता केही ‘हुनेखाने’ उद्यमी–व्यापारीहरूले तिलगङ्गा आँखा अस्पतालजस्तो प्रतिष्ठानलाई सक्दो आर्थिक एवम् भावनात्मक सहयोग गरे भने डा. रुइतज्ास्ता सक्कली समाजसेवीहरूलाई उत्साहित बनाउनेछ। कसले सोचेको थियो होला नेपालजस्तो अविकसित मुलुकबाट पनि आँखाको कृत्रिम रेटिना बनाएर विकसित देशहरूमा समेत निर्यात गरिन्छ होला भनेर! उनीजस्ता कर्मशील धर्तीपुत्रहरू न्ोपालमा अरू पनि होलान्। सौभ्ााग्यले उनको पहिचान भयो। तर नेपालमा लुकिराखेका अरू प्रतिभा र पौरखीहरूलाई खोज्ोर तरास्नु हाम्रो समाजको कर्तव्य हो।
प्ाचासौँ वर्ष भयो वनमारा भन्ने एउटा आगन्तुक झारले नेपालका सारा वनजङ्गल सखाप पार्दै लगेको। कस्तो यो झार, दन्त्यकथाको राक्षसजस्तै! यो झारलाई काटेर फ्याँक्यो भने झन् बढ्दै जान्छ। यो झारका हाँगाबिँगा र जराहरू वनजङ्गलमा यस्तो किसिमले फैलिएर जान्छन् कि त्यहाँ कुनै पनि अन्य बिरुवाहरूको बिउसमेत उमार्न सकिँदैन। उमि्रहाल्यो भने पनि बिरुवा माथि बढ्न सक्तैन। वनविज्ञानका निमित्त यो सबैभन्दा ठूलो अभिशाप हो। न त यसलाई मार्ने कुनै रासायनिक पदार्थ छ, न त यसलाई भौतिक रूपले उन्मूलन नै गर्न सकिन्छ। बस्, यो राक्षसी झार फैलियो भने हात बाँधेर किंकर्तव्यविमूढ हुनुबाहेक अर्काे उपाय नै छैन। तर केही युवाहरूले यो वनमारा झारलाई काटेर आधी बालेर यसलाई पेल्दै वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा ब्रिकेट बनाए। अहिले तराई भेगका केही युवक र महिलाहरू ब्रिकेट बनाउने उद्योगमा लागेका छन्। वनमाराबाट ब्रिकेट बनाउने यो प्रविधिले वनलाई मात्र जोगाएन, एउटा ठूलो इकोलोजिकल समस्याको समाधान भएको छ। त्यसबाहेक गाउँका थुप्रै मानिसले काम पाए र गरिबी–निवारणमा समेत केही हदसम्म यसले टेवा पुर्‍यायो।
यस्तैयस्ता थुप्रै अदृश्य नायकहरूको अर्को उदाहरणका रूपमा नुवाकोट ककनीका माहिला लामा सधैँको फुस्रो र धूलो उड्ने भिरालो जमिनमा देशकै एक मात्र स्ट्रबेरी भिलेज बनाउन लागिपरिरहेका छन्। ललितपुर चापागाउँकी गोमा लम्सालले १५ वर्षदेखि च्याउ–व्यवसाय गरेर आफ्नो च्याउ सहकारी संस्थामार्फत् बिक्री गरी गाउँमा च्याउको उत्पादन गर्ने कार्यमा भ्याई–नभ्याई काम गरिरहेकी छन्। उनको सहकारीमा अहिले १६० जना च्याउ–उत्पादकहरूको संलग्नता छ। उनले आफ्नो सहकारीका लागि सबैसँग मासिक रूपमा रु. १०० उठाएर १२ प्रतिशत ब्याजमा त्यही रकमलाई परिचालन पनि गरेकी छन्। उमरापोखरा पर्वतकी जसुदा बस्यालले घरमा पालिने
वस्तुभाउहरूको गोठबाट निस्कने गहुँत सङ्कलन गरी आफ्नो बारीमा मलका रूपमा प्रयोग गरेर बिक्रीसमेत गर्ने गरेकी छन्। पहिले उनको कामलाई नराम्रो मान्नेहरूसमेत अहिले उनीकहाँ गहुँत खरिद गर्न जान्छन्। पर्वतको कुस्मा शिवालयका नीलराज पुरीले गँड्यौलालाई आफ्नो आम्दानीको स्रोत बनाइरहेका छन्। उनी एकपटक जागिर खान साउदी अरब गई फर्केर आएका हुन्।
दाङका केही थारू युवाहरू कपाल काट्ने पेसामा सफल भएका छन्। यो उनीहरूको पुर्ख्यौली पेसा होइन। तैपनि उनीहरू अहिले कपाल काट्ने पेसामा सफल भएका छन्। दिपायलको सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूले आफ्नो पढाइसँगसँगै साबुन बनाएर आर्थिक उपार्जन गरिरहेका छन्। फुर्सदको समयमा गफ गर्नु, खेल्नु वा अन्य कुनै अनुत्पादक कार्य गर्नुभन्दा उनीहरू स्वरोजगारतर्फ लागेका छन्। म्याङलुङ तेह्रथुमका रामसिंह आलेमगर लगायत कतिपय कर्मचारीहरू जागिर छोडेर ढाका कपडा उद्योगमा रमाएका छन्। जागिरे पतिको मृत्यु भएपछि म्याङलुङकी उज्ज्वलता सुब्बाले अहिले उज्ज्वलता ढाका कपडा उद्योग सञ्चालन गरेर असहाय १ सय महिलालाई रोजगारी पनि दिएकी छन्।
एकचोटि लम्ाजुङमा बस्ने वीरबहादुर घले भन्ने एउटा व्यक्ति दुर्गम क्षेत्रको एउटा गाउँमा जाँदा किसानको एउटा घरमा बत्ती बलेको देखेर असाध्यै चकित भए। बिजुली कसरी बल्यो भनेर खोजतलास गर्दा किसानले आफ्नो घट्टेखोलाबाट घरायसी पाङ्ग्रा घुमाई बिजुली निकाली आफ्नो घरमा बालेको थाहा पाए। पछि वीरबहादुर घलेले लमजुङमा गएर आफ्नै लगानीबाट सानो हाइड्रोपावर जडान गरे र गाउँमा बिजुली वितरण गरे। यस्ता आँटिला, जोसिला र सिर्जनशील व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रले प्रयोग गर्न नसक्नुभन्दा ठूलो दुःखको कुरो अर्को के हुन सक्छ? यस्ता प्रतिभाहरू त नेपालमा थुप्रै छन्।
ग्रामीण पूर्वाधार विकास समूह नेपाल (ग्रिड नेपाल) का अध्यक्ष गुणराज ढकालको अगुवाईमा स्वदेशमै अध्ययनरत २५ जना युवा इन्जिनियरहरूको सहयोग लिई स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत–साधन र जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्दै खोला तर्नका लागि रोपवे (मेकानिइज्ा ब्रिज), तुइन, घिर्लिङ् जस्ता इनोभेटिभ कार्यहरू गरिएका छन्। दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसँगको सहकार्यमा नेपाली प्रविधि र श्रमको प्रयोग गरी नेपालमा केबलकार तथा रोपवे विकासका लागिसमेत यसले कोसेढुङ्गाको काम गरेको छ।
हलचोककी सुनीता श्रेष्ठ, कान्छा पुतुवार तथा सूचना विभागका पुराना फोटोपत्रकार विष्णुनरसिंह राणा आफ्नो जमिनमा फूलहरू फुलाएर बिक्री गरी आम्दानीमा वृद्धि गराइरहेका छन्। बारीमा धेरै फूलहरू उमारेकाले एक्लैले फूल टिप्न नभ्याएर अरूलाई पनि रोजगारी दिएका छन्। तनहुँ गुणादीका एक किसानले मकै लगाउने बारीमा घाँस रोपेर वार्षिक ९० हजार रुपियाँ आम्दानी गरिरहेका छन्। उखेलेर फाल्नुपर्ने घाँस बारीमा रोपेकाले सुरुका वर्षमा छिमेकीले उनलाई ‘मगज खुस्केको’सम्म भनेका थिए। नेपालका जुम्ल्याहा वैज्ञानिक राम–लक्ष्मणले लोडसेडिङको समयमा पनि बत्ती बाल्न सकिने यन्त्रको विकास गरेका छन्। उनीहरूले बनाएको टाइम लोडमिटरबाट घरमा निश्चित मात्रामा सधँैभरि विद्युत आपूर्ति भइरहन्छ।
चितवन कल्याणपुरका नगेन्द्र शाहले कम लागतमा बाली झार्ने र बत्ताउने मेसिन बनाएर सबै गाउँलेलाई गुन लगाएका छन्। ठमेल गल्कोपाखाका सानुकाजी श्रेष्ठले ग्यासविना नै खानेकुरा पकाउने प्रविधि पत्ता लगाएका छन्। उनले सौर्य ऊर्जालाई इन्धनको वैकल्पिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न फ्याँकिएका सिसा, प्लास्टिक र टिनबाहेकका घरमै उत्पादन हुने सबै किसिमका फोहोरहरूलाई प्रयोग गरी सूर्यको तापबाट आधा खर्चमा नै ऊर्जा निकाल्ने प्रविधि निकालेका छन्। इटहरीका रोजन राईलेे नदीले बगाएर ल्याएका काम नलाग्ने रूखका जरा र फेदमा कलाकृतिहरू तयार पारी व्यावसायिक उत्पादन गर्न सफल भएका छन्। यिनले बनाएको जराकला प्रधानमन्त्रीनिवासदेखि सामान्य मजदुरका घरसम्म सजावटका आकर्षक वस्तु बन्न सकेका छन्। उनले आफ्नो घरलाई नै ग्यालरी बनाउनुका साथै विभिन्न समूहलाई यससम्बन्धी तालिम पनि दिइरहेका छन्।
पोखराको हेम्जा गाउँका विष्णु पौडेल र लेखनाथ पौडेलले गाउँकै गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयको १५ रोपनी जग्गा भाडामा लिई कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नुका साथसाथै बहुआयामिक कृषिजन्य विकास गरेका छन्। फर्ममा तरकारीहरू मात्रै उत्पादन नगरी १५ वटा दुहुना गाई र ६ हजारवटाजति कुखुरा पालेर विकासे घाँस पनि उमारिरहेका छन्। उनीहरूको लगनशीलता देखेर धेरै गाउँले छक्क पर्छन्। प्युठान मरन्ठानानिवासी दिनबहादुर जीसीले अचम्मै लाग्ने गरी एउटै गोरुबाट पनि आफ्नो खेतबारी जोत्न सकिने नौलो तरिकाको विकास गरेका छन्। एउटा मात्रै गोरुलाई लाग्ने जुवा र हलोसमेत उनले तयार गरेका छन्। साना गरा तथा साना–साना सुर्का हुने ठाउँका लागि यो तरिका वरदान नै सावित भएको छ।
कालिकोट मान्माका कृष्ण चौलागाईँलेे तत्कालीन समयमा सबैभन्दा बढी द्वन्द्व हुने र हिंसाग्रस्त ठाउँ भनेर चिनिएको कालिकोटमा पनि बैङ्कबाट २ लाख रुपियाँ ऋण काढेर आफ्नै घरमा एउटा गेस्टहाउस सञ्चालनमा ल्याए। सङ्कटको घडीमा आफूले रगत–पसिना बगाएर ठड्याएको त्यस गेस्टहाउसमा कालिकोट जाने देशी–विदेशी व्यक्तिहरू खाने–बस्ने गर्छन्। जिल्ला सदरमुकाम मान्माको त्यस होटलमा मात्र आधुनिक शौचालय र बाथरुमको उपयोग गर्न पाइन्छ। चितवन शक्तिखोरका चेपाङ समुदायका केही जुझारू युवाहरू मिलेर एउटा संस्थामार्फत् त्यस भेगमा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउन चार गाउँलाई समेटी पैदल मार्ग निर्माण गरेका छन्। यो पैदल मार्गले गर्दा सिराइचुलीबाट सूर्याेदयको दृश्य, हिमालको अवलोकन, तीन सय वर्षपुरानो उपर्दाङगढी, चेपाङ सङ्ग्रहालय, झर्ना र गुफालगायतका ठाउँहरू देख्न पाइन्छन्।
पोखरा अर्चलाबोटका महिलाहरूले गहुँको छ्वालीबाट विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू बनाएर कुटीर उद्योग सञ्चालन गरिरहेछन्। उनीहरू मुना छ्वाली बटुलेर टोकरी, चकटी, ब्याग, बास्केट, डालो, गमला, ढकी आदि तयार पार्छन्। भोजपुर दिङलाको केउरेनीपानी र मूलपानीका कृषकहरूले आफ्ना बारीमा रुद्राक्षको खेती गरी घरमा सोलार राखेका छन् र गुजराती भैँसी किनेर दुग्धविकासमा समेत लागेका छन्। प्रत्येक घरमा १५ देखि २० वटा रुद्राक्षका रूखहरू छन्।
डडेलधुरा वन उपभोक्ता महासङ्घका प्रकाश साउद र अदुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक तुलबहादुर अधिकारी सिजनमा १० हजार बोतल लालीगुराँस सर्वत उत्पादन गर्दछन्। पाल्पा र डडेलधुरामा बनेको लालीगुराँस र अदुवाको सर्वत अहिले राजधानी भित्रिएको छ। मकवानपुर लोथरका तुलसी लामिछाने घुम्ती मौरीपालन व्यवसाय सुरु गरेपछि लाखौँ रुपियाँ आम्दानी गर्न सक्षम भएका छन्। उनी यसका लागि ७ महिना आफ्नो जिल्ला नै छाडेर मौरी चराउन मकवानपुर र सर्लाही जान्छन्। उनी जुन फूल मौरीले बढी मन पराउँछ, उक्त फूल कुन क्षेत्रमा पाइन्छ भनी बु‰दै हिँड्छन् र त्यहीँ गएर मौरी चराउने काम गर्दछन्। उनी वर्षको ५ महिना घरमै मौरी राखेर मह काढ्छन्।
ललितपुरस्थित नख्खु कारागारका एकजना बन्दी जीवन लामिछानेले आफू बन्दी भए पनि कारागारभित्रका सबै बन्दीहरूको रहनसहन र बानीव्यहोरामा धेरै परिवर्तन ल्याइदिएका छन्। उनले कारागारभित्र पत्रपत्रिका पढ्ने वातावरण मिलाइदिने, विभिन्न सामानहरू बनाउने सीपमूलक तालिम दिने, सामानहरू बेच्ने आदि कामहरू गरिरहेका छन्। अहिले त्यहाँका बन्दीहरू ढाकाटोपी, मफलर, रुमाल आदि बुन्ने काम गरेर बस्तछन्। उनले त्यहीँभित्रै विद्यालय पनि स्थापना गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले बन्दीहरूका अदालती काम–कारवाहीलाई प्रभावकारी र छिटो–छरितो बनाउन एडभोकेसी फोरमको सहयोगमा कानुन व्यवसायी झिकाई बन्दीहरूलाई कानुनी सहयोग पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
पर्वत पाङराङका ताराप्रसाद पौडेल आफ्नो विद्यालयमा पढाउने काम गरी अतिरिक्त समयमा बिउव्यापारमा समेत संलग्न भएका छन्। यसबाट उनले विद्यालयले दिने तलबभन्दा चार गुणा बढी आम्दानी गरिरहेका छन्। उनलाई विद्यालयको समयबाहेक अरू बेला उनको बारीमा मात्रै भेट्न सकिन्छ। विद्यालयको समयबाहेक अरू समय उनी आफ्नै बारीमा गोडमेल र खनजोतमा व्यस्त हुन्छन्। उनीे यसै कामबाट दुुई छोरा र एक छोरीलाई आवासीय विद्यालयमा पढाएर पनि थप पैसा जम्मा गर्न सफल भएका छन्।
गोरखा नारेश्वर दुम्सरीकी कमला विश्वकर्माले सधैँ पुरुषले मात्रै गर्दै आएको भाँडाकुँडा बनाउने काम गरेर आफ्ना पाँचजना छोराछोरी पढाउने र परिवार सबैको गुजारा गर्ने काम गरिरहेकी छन्। काँचो फलामलाई हिर्काई विभिन्न आकारमा बदलेर धेरै थरीका भाँडाकुँडा निर्माण गर्नु वास्तवमै एउटी महिलाका निमित्त सजिलो काम होइन। त्यसै गरी कैलाली फूलबारीकी २१ वर्षीया पार्वती चौधरी धनगढीमा मजदुरी गरेर इँटा बोक्ताबोक्तै मिस्त्री बन्न सफल भएकी छन्। मिस्त्री भएपछि अन्य महिला साथीहरूलाई पनि मिस्त्री बनाउन उनी मद्दत गरिरहेकी छन्।
फ्रान्स पुगेर चिजमेकरको २० दिने तालिम लिई फर्केका अशोक सिंह ठकुरीले चित्लाङमा घरैमा पालेका बाख्राको दूधबाट पनि चिज बनाएर मनग्गे आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने सिकाएका छन्। यस परियोजनामा अहिले गाउँका थुप्रै परिवारहरू संलग्न भएका छन्। यस कारखानामा नरम र कडा गरी दुई प्रकारका चिजहरू उत्पादन हुने गर्दछन्। त्यसै गरी त्यहाँका वासिन्दाले चित्लाङ चन्द्रागिरी चिज–उत्पादन समूह गठन गरी चिज–उत्पादनकार्य गरिरहेका छन्। त्यहाँको चिज अचेल विदेशमा समेत निर्यात गरिन्छ।
भोजपुरका बुद्धिमान राई र मीना राईले खुर्सानीबाट अचार बनाउने उद्योग सञ्चालन गर्न थालेपछि उनीहरूको आम्दानी आकासिएको छ। यी दम्पती पेसाले शिक्षक हुन्। उनीहरूले ज्योति अचार उद्योग भन्ने नाउँमा उद्योग दर्ता गरेर आफ्नो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उनीहरू गाउँमै फल्ने अकबरे नामको खुर्सानीबाट अचार बनाउने गर्दछन्।
हेटौँडा मकवानपुरका कृषकहरू आफ्नो बारीमा लाग्ने जीवहरूलाई नष्ट गर्दैनन्, बरू यसैबाट विभिन्न फाइदा लिन्छन्। कुन जीव वा कीरा खेतबारीका लागि राम्रो हुने मित्रजीव हो र कुन जीव वा कीरा शत्रुजीव हो भन्ने कुराका बारेमा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। पहिले–पहिले उनीहरू आफ्नो खेतबारीमा कीरा–फट्याङ्ग्रा देख्नेबित्तिकै कीटनाशक विषादि हालिहाल्थे, जसले गर्दा उनीहरूको पैसा खर्च हुनुका साथसाथै मित्रजीवसमेत नष्ट हुन्थे अनि अन्नबालीमा समेत नराम्रो असर पर्न जान्थ्यो।
तनहुँ बन्दीपुर याम्पाका कृषक केशवप्रसाद भट्टराईले अरूको जग्गा भाडामा लिएर गाईपालन व्यवसाय गरिरहेका छन्। यस व्यवसायबाट उनी मासिक २ लाख २५ हजार रुपियाँजति आम्दानी गर्दछन्। यसका लागि उनले १ सय ६७ रोपनी जग्गा वार्षिक ३ लाख रुपियाँ तिर्ने गरी भाडामा लिएका छन्। उक्त जग्गामा उनले होलेस्टिन, जर्सी, ब्राउनस्विचजस्ता अत्यन्तै उन्नत जातका ७० वटा गाईहरू पालेका छन्। उनले आफूले लिएको जग्गामध्ये ६५ रोपनी जग्गामा घाँस मात्रै लगाएका छन्।
पर्वत कुस्मा मुडिकुवा गाविसका किसानहरू रिाको व्यावसायिक खेती गर्दछन्। रिो एक प्रकारको वनस्पति हो। मुडिकुवाका थानेश्वर भुसालले यस खेतीबाट वार्षिक ७० हजार रुपियाँजति कमाउँछन्। यति मात्रै होइन, जिल्लाका मुडिकुवा, शङ्करपोखरी, खानीगाउँ, देवीस्थान आदि ठाउँमा यसको व्यापक रूपमा व्यावसायिक खेती गरिन्छ। सेम्पो, साबुन तथा अन्य महŒवपूर्ण चीज बनाउने उद्योगहरूले रिाको प्रयोग कच्चा पदार्थका रूपमा गर्दछन्।
माथि उल्लिखित उद्यमी र उद्यमशीलताका उदाहरणीय प्रस्तुतीकरण मैले विभिन्न सञ्चार–माध्यमहरूबाट सङ्कलन गरेको हुँ। नेपालका सञ्चार–माध्यमहरूबाट यस्ता सकारात्मक कुराहरू आउनुपर्छ भन्ने विचारधारा र लेखहरू मैले समय–समयमा प्रस्तुत गरेको थिएँ। हुन त अहिले पनि कतिपय सञ्चार–माध्यमहरूले नकारात्मक खबरहरू मुखपृष्ठमा छापी सकारात्मक खबरहरू भित्री पृष्ठहरूमा छाप्ने गर्छन्। तर यसपालि सेती नदीको खेचमा खसेकी सानी बालिका आराधना प्रधानलाई बचाउने १२ वर्षीय बहादुर कमल नेपाली र उनलाई साथ दिने क्यानोनिङ व्यवसायी युवाहरूको उत्साहजनक खबर सम्पूर्ण पत्रपत्रिकाहरूको मुखपृष्ठमा पढ्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो।
कमल नेपालीलाई प्रोत्साहन दिने क्रममा निजी क्षेत्रदेखि सरकारले समेत आर्थिक अनुदान दिएका छन्, यसलाई धेरै राम्रो भन्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ कमल नेपाली एउटा असाधारण बच्चा हुन्। १२ वर्षको कलिलो उमेरमा अरूलाई बचाउन अदम्य साहस देखाउने उनीजस्ता प्रतिभालाई हामीले यदि भविष्यको रेस्क्यू अप्रेसन क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले हाम्रो जस्तो हिमाली राष्ट्रको सर्वाधिक महŒव बोकेको गन्तव्यस्थलमा एउटा गजबको दक्ष सुरक्षाकर्मी जनशक्ति पैदा गर्न सक्छ।
नेपाल माउन्टेनरिङ एसोसिएसन र हिमालयन रेस्क्यू एसोसिएसनजस्ता सङ्घसंस्थाहरूले कमल नेपालीलाई अहिले उच्चस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै भविष्यमा विदेशमा पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक रेस्क्यू अप्रेसनको शिक्षा र तालिम प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके भने सायद उनी विश्वको एउटा महान् रेस्क्युयर बन्न सक्छन्।
वास्तवमा खोज्ने हो भने लुकेका प्रतिभाहरू गाउँ–गाउँमा पाइन्छन्। तर उनीहरूलाई खोजेर मात्र पुग्दैन। उनीहरूका सिर्जनशील एवम् उद्यमशील क्रियाकलापहरूलाई सरकारले अध्ययन गरेर, अनुगमन गरेर उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्दै उनीहरूको ट्य्राकलाई समयमै मूल्याङ्कन गरेर सुव्यवस्थित गरिदिनुपर्छ। राजनीतिलाई मात्र महŒव दिएर देशको विकास हुँदैन। गरिबी–निवारण गर्न न त कुनै सूत्र छ न त दर्शन नै, न त यस्ता कुराहरू पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाको खाकामा नै पाइन्छन्। देशको विकास धरातलीय एवम् व्यावहारिक प्रविधि र परियोजनाबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। यस्ता परिकल्पना गर्ने र मिहिनेत गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिभाहरूलाई जबसम्म राष्ट्रले परिचालन गर्न सक्तैन, तबसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगका पञ्चवर्षीय गुरुयोजनाले मात्रै केही हुँदैन।
लम्ाजुङको सदरमुकाम बेसीसहरमा पुलचोक क्याम्पसबाट पास भएका एकजना युवा इन्जिनियरले स्थानीय समुदायलाई सहभागी बनाई ३.५ मेगावाटको सानो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरे, वितरण गरे र महसुलसमेत उठाए। स्थानीय स्तरबाटै उत्प्ाादन गरिएको यो जलविद्युत आयोजनाले बेँसीसहरमा मात्रै होइन, सँगै जोडिएका पहाडी जिल्लाहरूमा समेत विद्युत् वितरण गर्छ। राजधानी काठमाडौँमा दिनहुँजसो लोडसेडिङ हुन्छ, तर लम्ाजुङमा हप्ताको एकचोटि मात्र बत्ती निभ्छ रे। तर त्यो झिलिमिली बत्तीपछाडिको कथा कसैलाई थाहा छैन। लमजुङलाई झिलिमिली पार्ने व्यक्ति को हो? त्यो समुदाय कुन हो? त्यसका बारेमा थाहा पाउन सबै विकासप्रेमी नेपालीहरू इच्छुक हुनुपर्छ। सीमित स्रोत र साधनबाट ती सिर्जनशील युवा र समुदायले केही हदसम्म मात्र त्यो गाउँमा विकासको बत्ती बाल्न सक्छन्, तर सरकारले उनीहरूलाई टेवा दिने हो भने त्यसभन्दा बढी बिजुली पैदा गरेर अरू थ्ाप योगदान दिन सक्छन्।
हालै मात्र मुम्बईमा आयोजना गरिएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय यान्त्रिक मेलामा नेपाली युवा वैज्ञानिकहरूले च्ाौथो स्थान प्राप्त गरे, जबकि त्यो बेला भारतभरिबाट पचासभन्दा बढी वैज्ञानिक समूहहरूले भाग लिएका थिए। जापानको अन्तर्राष्ट्रिय रोबोट प्रतिस्पर्द्धामा नेपाली टोली दोस्रो भएको थियो। उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने त कुरै छाडौँ, कसैले जिज्ञासासमेत राखेन। अब उनीहरूलाई के गर्ने? यदि समयमै उनीहरूलाई प्रयोग गर्न सकिएन भने प्रतिभाको पलायन भएर देशलाई मात्र नोक्सान हुँदैन, एउटा सिर्जनशील युवाको मनमा आफ्नो मातृभूमिप्रति वितृष्णा जाग्रत हुन सक्छ। त्यस्ता युवाहरूको सीप र श्रमलाई चिनेर सदुपयोग गर्न सकिएमा नयाँ नेपाल बनाउन धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन।
एक समयमा स्याङ्जाका युवा साथीहरू स्याङ्जामा कसरी पर्यटन–उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न म्ोरो घरमा आएका थिए। पर्यटकीय दृष्टिकोणले स्याङ्जा एउटा आकर्षक ठाउँ हो। तर नेपालमा यस्ता आकर्षक स्थलहरू ध्ोरै छन्। पर्यटकीय गन्तव्यस्थल बनाउने हो भने ती स्थानहरुलाई आफ्नै तरिकाले ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। स्याङ्जामा अर्गानिक फार्मिङ सुरु भइसकेको छ। स्याङ्जाको पर्यटकीय सुनमाथि सुगन्ध बनाउन एग्रो टुरिजमको छाप र छविलाई नै ब्रान्डिङ बनाउनुपर्छ। अर्गानिक फार्मिङलाई लक्ष्य बनाएर स्याङ्जालाई आकर्षक आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यस्थल बनाउन सकियो भने यहाँका बासिन्दाहरू स्वच्छ, स्वस्थकर, हरित बासस्थानमा बसेर गर्वका साथ आर्थिक उपार्जन गर्न सक्तछन्। स्याङ्जाले यसैमा आफ्नो आधिपत्य ९ःयलयउयथि० जमाउनुपर्छ ताकि स्याङ्जाको तरकारी भन्नासाथ सबै ग्राहक हुरुक्क होऊन्। एकचोटि यसले विश्वसनीयता कमाउन सक्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि स्याङ्जाको तरकारी र अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको माग बढ्छ। अरब र अन्य विकसित मुलुकमा त यसको बजार अपार छ। संसार अहिले स्वास्थ्यप्रति सम्वेदनशील भइरहेकोे हुँदा समयसापेक्ष यो उद्योग सफल भयो भने स्याङ्जाको मुहार फेरिनेछ र भविष्य उज्ज्वल हुनेछ।
यान्त्रिक र रासायनिक आतङ्कबाट त्रसित आधुनिक विकसित मुलुकमा अर्गानिङ फार्मिङ प्रविधिको ठूलो माग छ। आजकाल अत्यधिक रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिले सम्प्ाूर्ण खेतहरू विषयुक्त बनाइसकेका छन्। त्यसैले विदेशमा खाद्यपदार्थहरू झिकाइँदा निर्यातकर्ताले रासायनिक पदार्थहरू नमिसाइएको भनी प्रमाणित गर्नुपर्छ। हालसालै मात्र केही युरोपीय मुलुकहरूले नेपालबाट मह झिकाउन बन्द गरेछन्, किनभने नेपालमा मौरीहरू प्रदूषित खेतबारीमा जान्छन् रे। विगत केही दशकदेखि ‘जिन्दगीका लागि खाना होइन, खानाका लागि मात्र जिन्दगी’ भनेजस्तै हामीले प्रदूषित वस्तुहरू खाँदा–खाँदा क्यान्सरजस्ता डरलाग्दा रोगहरू निम्त्याइसकेका छौँ। त्यसैले अर्गानिक फार्मिङबाट उत्पादित सागसब्जी र फलफूलहरूको माग विदेशमा मात्र होइन, काठमाडौँमा समेत दिनप्रतिदिन बढ्दैछ। विदेशी पर्यटक र कूटनीतिज्ञहरू साधारण सागसब्जीलाई भन्दा अर्गानिक फार्मिङबाट उत्पादन गरिएको तरकारीलाई तीन गुणा बढी पैसा तिरेर किन्छन्। आजकाल थुप्रै विकासोन्मुख देशहरूले समेत अर्गानिक फार्मिङबाट उत्पादित प्राकृतिक वस्तुहरू निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउँदैछन्।
अर्गानिक फार्मिङ भनेको विश्वसनीयताका आधारमा मात्र विकसित हुने उद्योग हो। यसमा स्याङ्जावासीले बडो होस पुर्‍याउनुपर्छ। पहिले–पहिले ठिमीको तरकारी भनेपछि मानिसहरू हुरुक्क हुन्थे। अचेल ठिमीमा अनियन्त्रित विकासका कारण खेतीयोग्य जमिन हराउँदैछ र जहाँ अलिअलि खेत छ, त्यहाँ पनि बढी तरकारी उत्पादन गर्न अत्यधिक रासायनिक मल र कीटनाशक औषधि प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले अचेल ठिमीको तरकारीको परम्परागत नाम र महŒव बाँकी छैन।
स्याङ्जावासीले पनि क्षणिक लोभमा लागेर अर्गानिक फार्मिङलाई प्रदूषित गर्न खोजे भने यो उद्योग जन्मनुभन्दा पहिले नै मर्नेछ। विश्वसनीयता कमाउन धेरै समय लाग्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ। बढी कमाउने र बढी उत्पादन गर्ने लोभमा अर्गानिक फार्मिङको भविष्य खतम गर्नु हुँदैन।
एकताका मलेखुमा नदीको माछा खान यात्रीहरू हुरुक्क हुन्थे। जोसुकै पनि त्रिभुवन राजपथबाट यात्रा गर्दा मलेखुमा रोकिई एक–दुई प्लेट माछा खाएर नै जान्थे। तर अचेल जनकपुरको विकासे माछालाई पनि रैथाने माछा हो भन्दै बेचेर ग्राहकलाई ठग्न थालेपछि मलेखुमा माछा खानेहरूको ताँती कम भएको छ। कमसेकम म खान्नँ। विकासे माछा नै खानुछ भने मलेखुमा नखाई काठमाडौँैको पुरानो भन्सारमा माछा किनेर घरमै पकाए पनि भइहाल्यो नि! यदि अचेल पनि स्थानीय रेस्टुरेन्टहरूमा व्यापारीहरूले झूटो बोल्दै व्यापार गर्ने हो भने एक दिन मलेखुको माछाबजारको जस्तै साख खस्केर जानेछ। यस्तो नहोस् स्याङ्जामा।
बीस वर्षपहिले पाटनमा सबै धातुका मूर्तिहरूमा सुनले मोलम्बा गर्थे। ीयह ७ ध्बह : भतजयम को प्रक्रियाबाट ढलौटका वस्तुहरू ढाल्ने र ती मूर्तिहरूलाई कुँदेर सुनले मोल्ाम्बा गर्ने विधि नेपालमा मात्र छ। कलापारखीहरू न्ोपालमा बनेका सुनले मोल्ाम्बा गरेका ती मूर्तिहरू किन्न धेरै पैसा खर्च गर्छन्। तर केही लोभी व्यापारीहरूले ती धातुकलाहरूमा सुनले मोलम्बा गर्नुको सट्टा कम खर्चबाट इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरेर बेच्न थाले। पहिले त ती व्यापारीहरूले धेरै पैसा कमाए, तर पछि जब ग्राहकले यो त सक्कली सुनले मोलम्बा गरेको होइन इलेक्ट्रोप्लेटिङ पो गरेको हो भनी थाहा पाए, अनि नेपालको मूर्तिउद्योग धराशायी भयो। एक–दुईजना अदूरदर्शी लोभी व्यापारीहरूका कारणले परम्प्ारागत मूर्ति बनाउने कलाकारहरूको पेटमा लात्ती बजि्रएको थियो। यस्तो अदूरदर्शी कार्य नहोस् स्याङजा र मलेखुमा। यस्ता अवाञ्छनीय गतिविधिमा रोक लगाउन सरकारले वातावरणीय एवं पेसागत औद्योगिक नीति नै ल्याउनुपर्छ।
नेपालमा औद्योगिक एवं आर्थिक विकासका निमित्त व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नुका साथै डा. सन्दुक रुइत र महावीर पुनजस्ता दक्ष जनशक्तिलाई खोज्न र नेपालमै काम गर्नका लागि उत्साहित गर्न सक्यौँ भने नेपालबाट दिनप्रतिदिन अथाह प्रतिभाहरू विदेशमा पलायन हुने क्रम रोकिनेछ। छोराछोरीहरूलाई विदेशमा उच्च शिक्षा पढाउन हुँदैन भन्न खोजिएको होइन, यदि आÏनो आर्थिक क्षमताले भ्याउँछ भने विदेशमा उच्च शिक्षाका लागि पठाउन सकिन्छ। उच्च शिक्षा हासिल गरेर यदि नेपालमा फर्किई काम गर्ने हो भने यसले देशलाई अवश्य पनि मद्दत गर्नेछ। तर अधिकांश नेपालीहरू एकचोटि विदेश गएपछि विदेशको सुनौलो भविष्यको मृगतृष्णाले आÏनो देशलाई बिर्सिदिन्छन्, आÏनो देशलाई मात्र होइन, आफूलाई जन्म दिएका आमाबाबुलाई पनि बिर्सिदिन्छन्।
दुःख लाग्छ, आजकाल नेपालमा आफ्नो घरजग्गासमेत बेचेर, ऋण काढेर छोराछोरीहरूलाई विदेशमा पढ्न पठाएको देख्ता! के हाम्रो देशमा उज्ज्वल भविष्यको सम्भावना खत्तम नै भएको हो त? ताजुब लाग्छ, कसरी ती शिक्षित युवाहरूले आफूलाई जन्माएका आमाबाबुलाई दरिद्र आर्थिक हविगतमा पुर्‍याएर विदेशमा पढ्न जान सकेका होलान्! बिचरा आमाबाबुहरू आफ्नो भएभरको सम्पत्ति खर्चिई धेरै आशा राखेर छोराछोरीलाई विदेशमा पठाउँछन्, ठूलो मान्छे हुन्छ भनेर सोच्छन् र पैसा कमाएर पठाउँछ भन्ने आशा गर्छन्, तर कतिपय युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपको आधुनिक जीवनशैलीमा हराउँछन्। न उनीहरू त्यहाँ सफल हुन सक्छन्, न त नेपालमै फर्किन्छन्, बाबुआमाको सपना त कहाँ हो कहाँ!
यस्ता दुःखद उदाहरणहरू नेपालमा अहिले छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्। आजकाल नेपालमा पारिवारिक सम्बन्धको अवमूल्यन द्रूत गतिले भइरहेको छ। छोराछोरीले आमाबाबुलाई बिर्सने मात्र होइन, उल्टो कहिलेकाहीँ आफ्नो अधर्मीपन लुकाउन स्वयम् आमाबाबुलाई नै अनेक लान्छना लगाएर दोषी बनाउन पनि खोज्छन्। मलाई लाग्छ, मानवजातिको नाट्यसंसारमा जन्म दिने आमाबाबु छोराछोरीका लागि दुष्ट कहिल्यै हुन सक्दैनन्। खराब बरू छोराछोरी हुन सक्छन्, बुहारी–जुवाइँ हुन सक्छन् अनि उनीहरूलाई उक्साउने अरू तŒव पनि। तर आफ्ना सन्तान हुर्काउने आमाबाबु कहिल्यै खराब हँुदैनन्। परिस्थिति र परिबन्दले यदि जन्म दिने आमाबाबु खराब देखिए भने पनि सन्तानले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ।
जन्म दिने आमाबाबुले जिन्दगीभर आशीर्वादको हात बढाउँछन्, सम्झौतामा हात बढाउने पालो सन्तानको हुन्छ। यो मानिस मात्रको जन्मसिद्ध कर्तव्य हो। आमाको दूध पचाउने र बाबुको गुण चपाउनेलाई पशुसमेत भन्न मिल्दैन। त्यो त मात्र बिच्छी हो। जन्माउनेको छाती सधैँ सागर हुन्छ, जहाँ सबै छोराछोरीका फोहोर थुपारिन्छन्। सन्तान पानीका बाफ हुन्, उनीहरू कसिँगर र फोहोर सागरमा थुपार्दै आफू बादल बनी आकाशमा उडिरहन्छन्। तसर्थ बादलरूपी सन्तानसँग सागररूपी आमाबाबुलाई गाली गर्ने अधिकार छैन।
नेपाली समाजमा कपूत सन्तान मात्र होइन, सपूत छोराछोरीहरूको पनि कमी छैन। केही दिनअघि मलाई विराटनगरमा बस्ने एउटा साधारण व्यक्ति पवन श्रेष्ठले पठाएको एउटा बडो मार्मिक पत्रका कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उनका दुईवटा छोरा छन्। ठूला छोरा १२ कक्षामा पढ्दै थिए, साना विद्यालयमा पढ्दै थिए। छोराहरूको उमेर बढ्न थालेपछि पवन आत्तिन थाले। जेठा छोरालाई १२ कक्षासम्म जसोतसो खाई–नखाई सापटी लिई पढाएर भए पनि राम्रै श्रेणीमा पास गराए। तर अब अगाडि पढाउने कसरी? कहाँ पठाउने? उनी सधैँ आफ्ना छोराहरूलाई भन्ने गर्थे, ँबाबु! धेरै पढेर ठूलो मान्छे हुनुपर्छ। डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्नुपर्छ।ँ
बाबुको आशाअनुरूप छोराहरूले पनि पढे। तर जब छोराहरूले राम्रो नतिजा ल्याएर पढ्न थाले, पवन छटपटिन थाले। अब अगाडि पढाउन पैसा कहाँबाट ल्याउने? सम्प्ात्ति केही थिएन। सुब्बा स्तरको जागिरको आम्दानीले परिवार पाल्ने कि छोराछोरीको पढाइमा खर्च गर्ने? त्यही मौकामा संस्थानबाट स्वेच्छिक अवकाशको सूचना निस्कियो। अवकाश लिँदा पवनको हातमा ६–७ लाख रुपियाँ आउने भयो। अब के थियो, ‘नेत्रहीनलाई के चाहियो, दुई आँखा’ भनेजस्तै भयो। पवनले छोराको पढाइका निमित्त छ–सात लाख रुपियाँ खर्च गर्ने आँट गरे। तर छोराले बाबुलाई भने, ँतपाईँको जिन्दगीभरिको कमाइ मेरो पढाइका निमित्त खर्च गर्ने हो भने तपाईँहरूले के खाने र सानो भाइलाई कसरी पढाउने?ँ छोराको आफूप्रतिको र आफ्नो भाइको भविष्यप्रतिको मायारूपी त्यो भावुक प्रश्नले पवनलाई किंकर्तव्यविमूढ बनायो।
जब पवनले पठाएको पाँच पृष्ठको हस्तलिखित पत्र पढँे, छाती ढक्क फुलेर आयो। उनीहरूलाई मैले कहिल्यै देखेको छैन। तैपनि पवनको पत्र पढ्दापढ्दै ती भावुक दृश्यहरू फिल्ममा हेरेजस्तै मेरा आँखासामु झल्झली आउन थाले र पढ्दापढ्दै खुसीले आँखा विस्तारै रसाउन थाले। पछि छोराको कुरा सुनेर पवनले विराटनगरमा एउटा सानो किराना पसल खोल्ोछन् र त्यसैबाट आएको आम्दानीले परिवारको जीविकोपार्जन गर्दै छोराहरूलाई उच्च शिक्षा दिने विचार गरेछन्। पवनका छोराले विदेशमा पढ्न जाने कुरा कहिल्यै गरेनन्। अहिले उनी नेपालमै इन्जिनियरिङ पढ्दैछन्। हुन त छोरालाई डाक्टरी पढाउने ठूलो सपना थियो पवनको। तर सपना सधँै साकार हुँदैन।
अहिले पवनका जेठा छोरा ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज भक्तपुरमा पढ्दैछन्। त्यहाँ पढ्न चार वर्षका लागि एक लाख नब्बे हजार रुपियाँ तिर्नुपर्ने रहेछ। अहिले पवनको स्थिति धेरै राम्रो छ। उनको आकाङ्क्षा धेरै ठूलो छैन। उनी सन्तुष्ट छन्। जिन्दगीभर ताप्लेजुङमा सुब्बा भएर काम गरी जागिरबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि उनी परिश्रम गर्नबाट पछि हटेनन्। विराटनगरमा किराना पसल राम्ररी चलिरहेको छ। साना छोराले यसपालि प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छन्। पत्र पढ्दापढ्दै मैले विराटनगरमा पवनलाई टेलिफोन गरँे, र कुनै बेला काठमाडौैँ आउँदा मेरो घरमा आउन आमन्त्रण गरेँ। यो एउटा सानो कथा हो तर यो कथाभित्र थुप्रै मर्म लुकेका छन्।
बाबुको बाध्यतालाई बुझेर नेपालमै सम्भावना खोज्ने पवनका ती छोराहरू मलाई लाग्छ नयाँ नेपालका सक्षम सन्तान हुन्। नेपालमा यस्ता धर्तीपुत्रहरूको कमी छैन जो देशमै बसेर देशका निमित्त केही गर्न चाहन्छन्। तर हामी उनीहरूलाई चिन्दैनौँ र चिन्न पनि कोसिस गर्दैनौँ। जुन बेलासम्म हामी ती सम्भावित र सिर्जनशील वैज्ञानिक र उद्यमीहरूलाई उत्साहित गर्दैनौँ, उनीहरूको मिहिनेत र विवेकको सह्राहना गर्दैनौँ र उनीहरूको उद्यमशीलतालाई टेवा र सहयोग दिँदैनौँ, तबसम्म देशको विकास हुन सक्तैन। उनीहरूलाई राज्य र सञ्चारले पनि महŒव दिनुपर्छ। ‘फलाना नेताले फलाना कार्यक्रममा यो भन्यो, त्यो भन्यो’ भन्ने भाषणहरू छाप्नुको सट्टा उद्यमीहरूको मिहिनेत, श्रम र उद्यमशीलताका बारेमा दुई–चार शब्द प्रचार गर्दा के नै बिग्रिन्छ र? युवा वैज्ञानिकहरू विदेशमा गई पुरस्कार जित्ोर ल्याउँछन् तर उनीहरू नेपालकै ज्ञान–विज्ञानको अँध्यारो कोठामा हराउँछन्, जबकि कहिल्यै जिम्मेवारी नबोकेका र जिन्दगीमा सिन्ंकै नभाँच्ने व्यक्तिहरूका खोक्रा मन्तव्यहरू पत्रपत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा र टीभीको प्ा्राइम टाइममा सम्प्रेषण भइरहेका हुन्छन्। उनीहरूले के नै गरेका छन् र? जसले आफ्नो साधारण कर्तव्य त पालना गर्न सक्तैन, उसले अरूलाई के सहयोग पुर्‍याउला? बरू यसको सट्टा ती गलकगलन जभचयभक हरूलाई महŒव दिइएको भए राज्यले चाँडै विकास गर्न सक्थ्यो होला।
यस्ता थुप्रै कुराहरूलाई ध्यानमा राखी म दिल्लीबाट काठमाडौँ फर्केको थिएँ। पछि मैले मेरा मित्र अनील चित्रकारलाई ‘अनसङ हिरो’हरूको पुस्तिका तयार गर्ने कार्यमा सहयोग गर्नका लागि अनुरोध गरेको थिएँ। अनील चित्रकार यो देशका एउटा सिर्जनशील व्यक्ति हुन्। उनको दिमागले सधैँ केही न केही उपायहरू सोचिरहेको हुन्छ। उनले यस देशमा संरक्षण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा ठूलो बौद्धिक योगदान पुर्‍याएका छन्। केशव स्थापित काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर भएका बेलामा अनील चित्रकारले उनलाई ठूलो सिर्जनात्मक सहयोग प्रदान गरेका थिए। म अनील चित्रकारलाई सधैँ श्रद्धा गर्छु र कुनै पनि नयाँ काम गर्दा उनीसँग सम्पर्क राख्ने गर्छु। ‘अनसङ हिरो’ हरूबारेको किताब तयार गर्ने क्रममा पनि उनी र डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठसँग मैले सम्पर्क राखेको थिएँ। तर दुवैजना आ–आफ्ना काममा धेरै व्यस्त भएका हुँदा उनीहरूले चाहँदाचाहँदै पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन्। तैपनि मैले यो प्रयासलाई जारी नै राखेँ।
Posted in: audiobook,Karna Shakya,khoj
PRABIN KANDEL says:
December 26, 2013 at 4:09 AM Reply
उधेस्यहिन ,गन्तब्यनै नदेखेर निरास भयका युबाहरुलाई त कर्ण शाक्य जी को सोच् , खोज ले केही बाटो अबस्य देखाउने छ भन्ने लागेको छ।अत्मासन्तुस्ती,अत्मासम्मान नै सब भन्दा ठुलो जीवन को सफलता रहेछ भन्ने सार साह्रै मार्मिक लाग्यो।।।।।ह्रिदय देखी सम्मान छ कर्ण जी यो महानतालाई।।।।।। Prabin Kandel